4 ABS Swimming Overflow Drainage Grating plate grill lid spillway edge pool ABS, PVC **. – ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ
โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเกรทติ้งตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป แผ่นฝาปิดตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เอบีเอส พีวีซี
Manufacturers and Distributors Grating Extraction Drainage Grate Cover plate for overflow drainage around the pool edge ABS.
** Designed for gardening, immersed in water without rust. And protect the UV light. Used asatrough aroundafountain. There isasmall hole so it can be placed on top of the pebble. To drain well
Best-Seller-4 ABS Overflow Swimming GRATING Standard overflow water vents can be used for round pools.
Grille, pool or overflowing sieve around the pool. Made of ABS plastic, there are2standard sizes, 25cm wide and 30cm. There are2grades to choose from, lightweight, rustproof, for installation at the edge of the pool for overflowing water from the pool. Easy to drain into the water filtration system
1) Plastic grille ABS design is strong and multi-use. Used for flooring. Walkway plate on the fish pond. Drainage grilles around the house, apartment, school, factory, swimming pool surrounds. 2) For gardening, immersed in water, not rusty. And protect the UV light. Used asatrough aroundafountain. There isasmall hole so it can be placed on top of the pebble. To drain well
3) The size of the Overflow Grating widths between 25cm and 30cm can be used asaframe rail orarectangular pool shaped curve (Free Form Gutter),
4) are standard colors. White Cream Color,2cores and2quality grades to choose from. Both models are extremely durable, thick and standard model according to budget.
Specification of Swimming Pool Overflow Grating Swim overflow pool around the pool edge.
Grating for linear gutters manufactured in high quality, rigid PVC. Characteristics of the grating with the elements parallel to the edge of the pool: that is robust, solid and pleasant to walk on, which efficiently collects the overflow water at the edge of the pool and provides maximum safety and hygiene. Profile of run-up swimming pool grating with grating bars running at right angles to the edge of the material High quality, extremely hard-wearing and fully recyclable plastic, with UV absorber., Entirely corrosion-free and resistant to chlorine, sea water and spa water., no need for any metal parts; surface enclosed on all sides to provide maximum hygiene. the grating guaranteeahigh load capacity and mechanical resistance.
3. rot-proof: resistant to micro organisms and bacteria responsible for molds;
5. เครื่องใช้ที่จำเป็น/เครื่องตกแต่ง/เครื่องเล่น/ ได้แก่ ชุดดูดตะกอนทำความสะอาด, ชุดแปรงขัดสระ, น้ำยาทดสอบสภาพน้ำ, คลอรีน-โซดาแอช-กรดเกลือ, รูปปั้นน้ำพุ น้ำตก, Slider,ที่นอนลม,โต๊ะ เก้าอี้ ร่มสระ, ชูชีพRecommendations for buildingaswimming pool. ABS Swimming Pool Drainage Gully Gutter Grating Factory Manufacturers and distributors of grating, drainage grate made
of ABS material, durable, sticky, lightweight, rustproof, not cracking easy frame. Even in the sun for long periods of time, it is easy to install asaswimming pool equipment, placed on the drain around the pool to prevent dirt from falling into the pool and overflowing water from the pool. Drain into the water filtration system for the beautiful pool. And can also be used. Instead of steel lugs perfectly. Drainage around the house. And twin rods are suitable for common pool and circular pool. White and cream
To buildapool for happiness and health for themselves and their families. There should be some understanding of the swimming pool. To getacomplete pool and pool system. Because by the general condition. If there is no understanding. May be deceived or concealed. Makeadecision with the cheap. Offered by not knowing that he supplied the filter, pump, equipment What is the standard work for the pool? Let’s see what kind of pool types, types, pool systems, pool filters, pumps, pool equipment, decor / appliances are needed.
1. The pool is generally divided into
1.1 pool isapool that contains materials for easy production and installation, such as walls, metal, fiberglass, etc., so cheap. But it has limited lifetime. Need to spare
1.2 Concrete Pool isaswimming pool that uses engineering construction standards. The price is higher but it is durable in high usage. Long life.
2. Pool types include the pool in the house (private pool, club pool in general), various sizes and styles. With standard pool type match The need to establish rules and standards
3. pool was divided into two systems, namely
3.1 system by using Box Skimmer Skimmer. The point of overflow water, dirt on the surface, the
3.2 system overflow [Overflow System]apool overflow taking up dirt on the surface of the surrounding mouth wash the tank and circulated throughafiltration system back to a
4. Swimming Pool Equipment [Swimming Pool Equipment] required for installation in the pool.
Maindrain, pool or wall cleaner, vacuum cleaner, skimmer or Overflow Grating, Ladder, Underwater Light, Water Spray or Spa Set.
5. Essential Equipment / Furnishing / Chlorine-soda ash, hydrochloric acid, fountain statue, waterfall, slider, air mattress, table chair, umbrella, pool, lifeboat
Shancon’s plastic grating plate The grill is designed to be meticulously designed. To maximize drainage efficiency, but with the smallest groove size. This can be used asabase for small rock pebbles used asabase, gardening in harmony with nature. There is only one Patented, unique in the world, it is durable, suitable for drainage systems, walkways, raised floors.
Available for swimming pools, gardening, walkways, fish ponds, condominiums, condominiums around the factory, suitable for indoor use. The passage of the two standard sizes 25x100cm and 30x100cm. Lightweight, not rust, but cheaper to get through. If sun or chemical exposure often. There isabroken frame.
Factory floor design Floor elevation Using PP plastic grating.
Application of plastic grating, flooring, corrugated in industrial factories without chemical sun. Make it better than steel straight, not rust, lightweight, easy maintenance.
– ผสมสีได้ง่ายทั้งลักษณะโปร่งแสงและทึบแสงPolypropylene (PP) polypropylene
is opaque. Opaque than Polyethylene It hasadensity in the range of 0.890 – 0.905, which is why it can float as well as other polyethylene-like polyethylene. General features
– hard surface, scratch resistant, easy to deformation
– can be built into the hinge itself. Very durable
แผ่นปูพื้นสำเร็จรูปพลาสติก ราคาถูกกว่าเหล็กและกลาสไฟเบอร์(FRP) เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ฝาระบายน้ำ ปูพื้นทางเดิน โรงเรือนในฟาร์มปศุสัตว์ น้ำหนักเบา ไม่เก็บกลิ่น ประหยัดเวลาในการติดตั้ง ติดตั้งแล้วสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้Drainage specialist swimming pool and wellness area
grating sieve to drain the pool. Overflowing pool grill around the pool.
Grille, pool or overflowing sieve around the pool. Made of ABS plastic (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Transversal Grating stabilized against UV rays. Both strength, toughness, impact strength is good. There are2standard sizes, 25cm wide and 30cm high. There are2quality grades to choose from, lightweight, not rusty, but with minimal force. If the sun is long. There isabroken frame. Cheapest price Suitable for indoor use. Around the pool The area where no cars run is beautiful, durable, suitable for installation at the edge of the pool to overflow the pool. Can be drained down the drain to easily enter the water filtration system. Can be used in eitherarectangular frame orafree form gutter. It can also be used instead ofasteel grate. To drain water around the house floor animal farm floor footpath without restrictions.
• The special surface pattern provides an anti-slip surface and pleasing appearance, while remaining easy to clean.
• Available in choice of2widths (250mm / 300mm) and2styles (for straight or curved profiles), the Chancon standard range of channels Grating offer
Overflow Gratings around the pool / Swimming Pool Overflow Grating Colors The standard is Cream Color,2cores and2quality grades to choose from. Both models are extremely durable, thick and standard model according to budget.
ABS1: Overflow Grating: H = 22.5mm, Standard Type
(46 pieces / meter, 12.5mm thick plastic, standard version, double axis for circular pool)
ABS2: Overflow Grating: H = 22.5mm, Standard Type
ABS3: Overflow Grating: H = 24.5mm, Heavy Load
(38 pieces / meter, 15mm thick plastic, extra thick, double axis for circular pool)
ABS4: Overflow Grating: H = 24.5mm, Heavy Load
(38 pieces / meter, 15mm thick plastic, extra thick version, double core used for circular pool)
Recommendations for buildingaswimming pool. ABS Swimming Pool Drainage Gully Gutter Grating Factory Manufacturers and distributors of grating, drainage grate made
The swimming pool gratings are flexible tiles available inavariety of colors, sizes and styles. These are manufactured using injection molding process and provide maximum weather resistance. The unique design of the gratings allows easy installation and determination of length. The gratings are easy to clean and maintain and are UV protected for longer service life. These can easily bend over the corners and offer anti-slip finish. The assortment is available in various color choices as per the requirements pool. These minimize the overflow of water fromaswimming pool. These are fabricated using high grade plastic or stainless steel withadesign which allows easy seepage of water inadrain which is connected to the drainage system of the pool. Special Features Confirm international design and quality Anti-slippery and very comfortable. Available in different colors UV treated Made of co-polymer. Available in different sizes and colors. The injection molded design gives itaperfect finish. Easy to install and easy to clean. Height, Width and Length: As per the requirement of the client. These are used to cover the overflow channel around the swimming pool. We offer swimming pools in different sizes. The Pool Gratings have enough gap between them to ensure that the Overflowing Pool water enters the overflow drain but also to ensure thataperson’s foot does not get inside it. Our Swimming Pool Gratings are made of Injection Molded Plastic. Heavy duty and Strong enough to bear the weight of many people Anti-slippery Design and very comfortable. Available in different colors Made of UV treated co-polymer. Available in different sizes and colors. The injection molded design gives itaperfect finish. Easy Installation and Cleaning. Fits both Straight and curved drains Height, Width and length: as per the requirement of the client Chemical and corrosion resistant Ideal for overflow systems of swimming pools and spas Our Swimming Pool Gratings are made of Injection Molded Plastic. Heavy duty and Strong enough to bear the weight of many people Anti-slippery Design and very comfortable. Available in different colors Made of UV treated co-polymer. Available in different sizes and colors. The injection molded design gives itaperfect finish. Easy Installation and Cleaning. Fits both Straight and curved drains Height, Width and length: as per the requirement of the client Chemical and corrosion resistant Ideal for overflow systems of swimming pools and spas Our Swimming Pool Gratings are made of Injection Molded Plastic. Heavy duty and Strong enough to bear the weight of many people Anti-slippery Design and very comfortable. Available in different colors Made of UV treated co-polymer. Available in different sizes and colors. The injection molded design gives itaperfect finish. Easy Installation and Cleaning. Fits both Straight and curved drains Height, Width and length: as per the requirement of the client Chemical and corrosion resistant Ideal for overflow systems of swimming pools and spas Easy Installation and Cleaning. Fits both Straight and curved drains Height, Width and length: as per the requirement of the client Chemical and corrosion resistant Ideal for overflow systems of swimming pools and spas Easy Installation and Cleaning. Fits both Straight and curved drains Height, Width and length: as per the requirement of the client Chemical and corrosion resistant Ideal for overflow systems of swimming pools and spas
Polypropylene (PP) polypropylene
Plastic sheeting Cheaper than steel and fiberglass (FRP) for all types of industrial floor drainage. Livestock onalightweight farm does not smell, save time to install. The installation can be moved to another location.Drainage specialist swimming pool and wellness area
The Anti Transgrate PP overflow grating is our swimming pool grating solution that provides maximum comfort to the feet and excellent durability. Our overflow grating is molded in Thailand from impact modified thermoplastic material which makes our swimming pool grating super strong and durable. They are designed to be easy to install and flexible to meetavariety of different swimming pool specifications. High quality PVC, resistant to chemical products, sound absorbing, insulating, comfortable and decorative; resistant to UV rays, it can be used both indoors and outdoors; quick and simple installation, with no need for special personnel; easy to remove since no adhesives are required; suitable for campgrounds, trailers, vans, stages, trade show stands, mini-clubs, childcare centers, nursery schools, swimming pools, gyms,
Profile swimming pool type gratings are constructed to be able to bridge over the overflow self-supporting channel. So no additional support is required. The profile width can be customized within the range, standard edge versions available: obtuse angle corners, right angle, or other edge solutions for miter corner 90 with synthetic or stainless steel enclosing elements. The raw materials used for ASM-Profile FSR swimming pool gratings do not contain any hazardous materials which evaporate any toxics or noxious fumes over time. The profiles are free from formaldehyde, asbestos, HCH, PCB, PCP and CFC. In addition they are free from cadmium, lead and do not contain any monomers, biocides or plasticisers. The basic material is permissible for food-contact. ASM-Profile swimming pool gratings have been tested for safety slip with test certificate according to DIN 51097 validated group B with reference to acid. Tested by the “Fliesenleger-Vereinigung EV” on 22.10.2014, this guaranteesadistance between the single profiles. The long operational lifetime and the extremely hygienic features of the FSR swimming pool gratings are ensured by sealing and free from porous, polished surfaces.
Swimming pool grates Safe, hygienic & durable Grates for swimming pools and plumbing applications stand for the highest safety and hygiene standards. The swimming pool grates are easy on the feet and offer complete comfort. overflow gratings are suitable for use in both public and private pools, and collect all incidental overflow water very effectively. They can run perpendicular or parallel to the edge of the pool and can be adapted to any shape ofafree-form pool, whirlpool or rectangular pool. Whatever version you choose, swimming pool grates stand for safety, hygiene and durability. All grate types haveasafety seal and non-slip certification, and guaranteeatotally hygienic finish. Choose your swimming pool grate now from lots of different
# Grating, fiberglass, plastic fiberglass drainage overflow pool, # drainage hatch cover, cast iron drainage cover # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, # Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Anchoring Devices Attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock # Fastenal Fastener Bar Steel Grating # #Curbed Drainage Grating Scupper, #Curbed Drainage Grating Scupper, #Drawing Drainage Grating Scupper, #Egg Crate, #FRP Stair Tread Nosing Step Protector #FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting # nose plate, corner, eyebrow, ladder cover # Fiberglass floor coverings, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, #
FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads nosing, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, trench covers, ditch, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, spout clad, media support, air mesh, railing, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, Laminate, Metallic, Aluminum Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, exotic PET, Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dipped Tinplates Electro forge Galvanized, brass Zinc, supply, Food Grade, weight per m2, spacing dimension, load table cutting, Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification price catalogue for sales, InfosoftCHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแชนคอน
15. FORMWORKS / Form Tie Accessories System for Reinforced Slab Wall Floor Concrete Building Construction FORMWORKS TIES Timber Carpenter Design System: DYWIDAG TIE ROD เหล็กที่มีเกลียวตลอดเส้น(ไทร็อด) + WingNut(วิงนัท) + Water Stopper + steel cone / Hole Spacing Fiberglass FormTies / Scaffolding Price Suppliers อุปกรณ์ยึดแบบชนิดแรงทนดึงสูง สามารถใช้กับงานแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด เช่น กำแพงกันดินใช้กับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เหล็กยึดแบบ ฟอร์มทายไทน์ , วิงนัท, ข้อต่อกันน้ำ, น็อตหกเหลื่ยม, น็อตล็อค, ข้อต่อตรง, เชียร์โคน, แคล้มป์สปริง, แคล้มป์ลิ่ม, พลาสติกโคน นั่งร้านเหล็ก ประกับ โพลีโคนABS Spa Swimming Overflow Grating ตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป แผ่นฝาปิดตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ (สีขาวครีม) Our GratingsIs carefully designed to combine the strength of materials and injection mounded to its highest quality and performance as to prolong product’s lifespan and it could withstand more than 500kg as tested by Singapore Productivity and Standards Board.
Set upaprofessional pool needs components built with the best materials in order to live longer with the best safety. For this reason we use only first quality raw materials and we produce in Italy. PVC, ABS and polypropylene copolymer, haveamix compound to increase stability on UV ray, impacts and to become resistant to mold and bacteria. We produce grating in various dimensions to safisty every pool, all with parallel elements to allow the best water outflow. All components fully respects to F.I.N.A. and the safety rules, in addiction to ROHS and REACH European norms. All products comply with the FINA regulations and UNI EN 13451.Swimming Pool Overflow Spa Grating We produce for our clients swimming pool grating, which is appreciated in the market for its superior performance and high durability. We offer various; flexible swimming pool overflow grating tiles, in variety of colors, sizes, and styles can be preferred. Gratings are installed on the side water channel all along the pool water surface. These water overflows due to jumping or swimming by the swimmers.Our swimming pool gratings are high on demand among the clients. Moreover, the clients can avail themselves with our swimming pool gratings at very affordable prices. We offer various and flexible swimming pool overflow grating tiles. Our new grating tile confirms to international standards, the particular comb-like structure efficiently slows down the speed of waves. It hasacomfortable and anti-slippery design. The unique design allows easier installation and easier determination of length; we can customize the grating for our customers for bulk requirements. We offer various and flexible swimming pool overflow grating tiles. A variety of colors, sizes and styles are available. We are the leading supplier of swimming pool gratings. These minimize the overflow of water fromaswimming pool. These are fabricated using high grade plastic or stainless steel withadesign which allows easy seepage of water intoadrain which is connected to the drainage system of pool.
ນ້ໍາສະອາດ ABS ສະປາລອຍນ້ໍາ Overflow Drainage Gully Gutter Grating
ຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ຈໍາຫນ່າຍ Grating Extraction Drainage Grate ແຜ່ນປົກສໍາຫລັບການລະບາຍນ້ໍາໄຫລ່ຮອບຂອບບະຫມີ່ ABS.
** ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາສໍາລັບການເຮັດສວນ, ເຮັດດ້ວຍນ້ໍາ, ບໍ່ມີກິ່ນຫອມ. ແລະປົກປ້ອງແສງສະຫວ່າງ UV. ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ trough ປະມານ fountain ໄດ້. ມີຂຸມຂະຫນາດນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດຖືກວາງໃສ່ເທິງແກ້ວ. ເພື່ອລະບາຍນ້ໍາດີ
ຜູ້ຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຜູ້ຂາຍ -4 ABS Overflow Swimming GRATING ສະລອຍນ້ໍາມາດຕະຖານ Overflow ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບສະນຸກເກີມົນ.
ຂີ້ຝຸ່ນ, ສະນ້ໍາຫຼື overflowing sieve ປະມານສະນຸກເກີ. ຜະລິດຈາກພາດສະຕິກ ABS ມີຂະຫນາດມາດຕະຖານ2ຂະຫນາດ 25 ຊົມກວ້າງແລະສູງ 30 ຊມມີ2ຊັ້ນທີ່ເລືອກຈາກນ້ໍາຫນັກເບົາ, rustproof ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຢູ່ແຄມນໍ້າເພື່ອຮັກສານ້ໍາອອກຈາກສະລອຍນ້ໍາ. ງ່າຍທີ່ຈະລະບາຍເຂົ້າໄປໃນລະບົບການກັ່ນຕອງນ້ໍາ
1) ການອອກແບບ ABS ລວດຄລິບພາດສະຕິກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະໃຊ້ຫຼາຍ. ໃຊ້ສໍາລັບພື້ນເຮືອນ. ແຜ່ນດິນໃນຫນອງປາ. ລະບາຍນ້ໍາປະມານຫ້ອງນ້ໍາ, ອາພາດເມັນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງງານ, ສະລອຍນ້ໍາລ້ອມຮອບ.
2) ສໍາລັບ ການເຮັດສວນ, ແຊ່ໃນນ້ໍາ, ບໍ່ມີກິ່ນຫອມ. ແລະປົກປ້ອງແສງສະຫວ່າງ UV. ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ trough ປະມານ fountain ໄດ້. ມີຂຸມຂະຫນາດນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດຖືກວາງໃສ່ເທິງແກ້ວ. ເພື່ອລະບາຍນ້ໍາດີ
3) ຂະຫນາດຂອງຄວາມກວ້າງເກີນ Grating ລະຫວ່າງ 25cm ແລະ 30cm ສາມາດໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເປັນລາງລົດໄຟກອບຫຼື curve ລອຍນ້ໍາສີ່ຫລ່ຽມຮູບ (Form Gutter Free),
4) ມີສີມາດຕະຖານ. ສີຂາວສີຄີມ,2ຊັ້ນແລະ2ຄຸນະພາບທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ຮູບແບບທັງສອງແມ່ນມີຄວາມທົນທານ, ຮູບແບບຫນາແລະມາດຕະຖານຕາມງົບປະມານ.
ລອຍນ້ໍາຫລາຍເກີນບາຍນ້ໍາ Transversal Grating ປົກ grating sieve ກັບເດັກສະນຸກເກີທີ່. ສະລອຍນ້ໍາເຕັມໄປດ້ວຍສະລອຍນ້ໍາ
ຂີ້ຝຸ່ນ, ສະນ້ໍາຫຼື overflowing sieve ປະມານສະນຸກເກີ. ຜະລິດຈາກ ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Transversal Grating ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຕໍ່ແສງແດດ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຜົນກະທົບແມ່ນດີ. ມີ2ຂະຫນາດມາດຕະຖານ, ກວ້າງ 25 ຊມແລະສູງ 30 ຊມ. ມີ2ຊັ້ນທີ່ເລືອກຈາກ, ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ບໍ່ກ້ຽງ, ແຕ່ມີແຮງຫນ້ອຍ. ຖ້າແດດຍາວ. ຈະມີກອບທີ່ແຕກຫັກ. ລາຄາຖືກທີ່ສຸດ ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນລົ່ມ. ອ້ອມຂ້າງສະລອຍນ້ໍາ ພື້ນທີ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແລ່ນລົດແມ່ນສວຍງາມ, ທົນທານ, ເຫມາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຢູ່ແຄມຂອງສະລອຍນ້ໍາ. ສາມາດລະບາຍນ້ໍາລົງໄດ້ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບການກັ່ນຕອງນ້ໍາຢ່າງງ່າຍດາຍ. ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນກອບຮູບສີ່ຫລ່ຽມຫລືກ່ອງຮູບແບບຟຣີ. ມັນຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ແທນທີ່ຈະເປັນທໍ່ເຫລໍກ. ເພື່ອນ້ໍາອ້ອມຮອບເຮືອນ, ພື້ນທີ່ກະສິກໍາ, ເສັ້ນທາງຍ່າງ, ເສັ້ນທາງຍ່າງທາງໂດຍບໍ່ຈໍາກັດ.
• Chancon Channel Grating ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ polyethylene ແລະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານກັບແສງ ultraviolet, Chancon Channel Grating ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ. ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕ້ານຜົນກະທົບຂອງສານເຄມີທີ່ມີຢູ່ໃນມື້ນີ້ – ລະດູການຫຼັງຈາກລະດູການ. ຕາຂ່າຍຊ່ອງ Chancon ແມ່ນມີຄວາມຫນາ 25 ມົມເປັນມາດຕະຖານສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມທົນທານທີ່ດີທີ່ສຸດ. •ຮູບແບບດ້ານພິເສດສະຫນອງຫນ້າດ້ານການປ້ອງກັນແລະຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສວຍງາມ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງສະອາດງ່າຍ. •ສະຫນອງເປັນອົງປະກອບສ່ວນບຸກຄົນທີ່ພຽງແຕ່ clip ຮ່ວມກັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໄວແລະງ່າຍດາຍ. ລະບົບນີ້ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຊ່ອງທາງເພື່ອກວດກາຖ້າຕ້ອງການ.
ມີຂະຫນາດ2ຮູ (250 ມມ / 300 ມມ) ແລະ2ຮູບແບບ (ສໍາລັບຮູບແບບທີ່ກົງຫຼືໂຄ້ງ), Chancon ມາດຕະຖານຂອງຊ່ອງ Channels ໃຫ້ບໍລິການ
Overflow ປະມານສະນ້ໍາ / Pool Overflow Grating ມາດຕະຖານແມ່ນສີຄີມ,2ແກ້ວແລະ2ຊັ້ນທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ຮູບແບບທັງສອງແມ່ນມີຄວາມທົນທານ, ຮູບແບບຫນາແລະມາດຕະຖານຕາມງົບປະມານ.
ABS1: Overflow Grating: H = 225mm, Standard Type
(46 ຊິ້ນ / ເມດ, ພາດສະຕິກຫນາ 12,5 ມົມ, ຮຸ່ນມາດຕະຖານ, ແກນຄູ່ສໍາຫລັບສະລອຍນ້ໍາວົງ)
ABS2: Overflow Grating: H = 225mm, Standard Type
ABS3: Overflow Grating: H = 245mm, Load ຫນັກ
(38 ຊິ້ນ / ແມັດ, ພາດສະຕິກຫນາ 15 ມິນລິເມດ, ຫນາພິເສດ, ແກນຄູ່ສໍາຫລັບສະລອຍນ້ໍາວົງ)
ABS4: Overflow Grating: H = 245mm, Load ຫນັກ
(38 ຊິ້ນ / ເມດ, ພາດສະຕິກຫນາ 15 ມົມ, ຮຸ່ນຫນາຫນາ, ກ້ອນຄູ່ສໍາຫລັບສະລອຍນ້ໍາວົງ)
ຂໍ້ກໍາຫນົດຂອງລອຍນ້ໍາ Overflow Grating ລອຍນ້ໍາຮອບບໍລິເວນສະລອຍນ້ໍາ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, PVC ແຂງແຮງ. ລັກສະນະຂອງການຮູ້ບຸນຄຸນກັບອົງປະກອບຂະຫນານກັບ ຂອບຂອງສະນຸກເກີໄດ້: ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຫມັ້ນຄົງແລະເປັນສຸກທີ່ຈະຍ່າງສຸດ, ປະສິດທິຜົນເກັບນ້ໍາລົ້ນຢູ່ຂອບຂອງສະນຸກເກີແລະສະຫນອງຄວາມປອດໄພສູງສຸດແລະອະນາໄມ. Profile ດໍາເນີນການມ້ວນຂຶ້ນລອຍນ້ໍາ grating ກັບຫລັກການຮູ້ບຸນຄຸນແລ່ນຢູ່ດ້ານຂວາຂອງສະນຸກເກີທີ່ຂອບວັດສະດຸຄຸນນະພາບສູງ, ສຸດແຂງ, ນຸ່ງເສື້ອແລະຖົງຢາງກັບມາໃຊ້ໃຫມ່ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ມີເຄື່ອງດູດ UV., ທັງຫມົດ corrosion, ແລະທົນທານຕໍ່ກັບຄໍລີນ, ນ້ໍາທະເລແລະປາ. ນ້ໍາ, ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພາກສ່ວນໂລຫະໃດຫນຶ່ງ; ພື້ນຜິວປິດລ້ອມທັງສອງດ້ານເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະອະນາໄມສູງສຸດ. ການຄໍ້າປະກັນຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດສູງແລະການຕໍ່ຕ້ານກົນຈັກ.
1. ສານຕ້ານຕໍ່ UV: ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສານພາດສະຕິກຈາກສີເຫລືອງທີ່ເກີດຈາກແສງແດດ;
2. ສານຕ້ານຕໍ່ຕ້ານຊັອກໂກແລດ: ຮັບປະກັນການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າເກົ່າ; 3. ຫຼັກຖານທີ່ທົນທານຕໍ່: ທົນຕໍ່ເຊື້ອຈຸລິນຊີແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບແມ່ພິມ;4ບໍ່ມີທາດແຄດມຽມແລະນໍາ; 5. ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ RoHS ແລະ REACH, ມີສູດທີ່ເຫມາະສົມກັບສິ່ງແວດລ້ອມ; 6. ຜະລິດໃນ PVC ສີຂຽວ. 7. ຮັບຮອງວ່າຈະເປັນການຕ້ານການລ້າໆຕາມມາດຕະຖານ DIN 51097.
ລຸດລົງໃນລະບົບການກັ່ນຕອງນ້ໍາສໍາລັບສະນຸກເກີທີ່ສວຍງາມ. ແລະຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້. ແທນທີ່ຈະເຫີຍີຍບເຫລໍກຢ່າງສົມບູນ ລ້າງຫນອງທີ່ອ້ອມຮອບຫນອງ. ແລະກ້ອນຄູ່ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບສະນຸກເກີທົ່ວໄປແລະສະນຸກເກີວົງ. ສີຂາວແລະສີຄີມ
ການກໍ່ສ້າງສະລອຍນ້ໍາເພື່ອຄວາມສຸກແລະສຸຂະພາບສໍາລັບຕົວທ່ານເອງແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ. ຄວນມີຄວາມເຂົ້າໃຈບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສະລອຍນ້ໍາ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສະລອຍນ້ໍາແລະລະບົບສະນຸກເກີ. ເນື່ອງຈາກວ່າໂດຍສະພາບທົ່ວໄປ. ຖ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້. ອາດຈະຖືກຫລອກລວງຫລືຖືກປິດບັງ. ເຮັດການຕັດສິນໃຈກັບລາຄາຖືກ. ສະເຫນີໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າລາວໄດ້ສະຫນອງການກັ່ນຕອງ, ປັ໊ມ, ອຸປະກອນ ວຽກງານມາດຕະຖານສໍາລັບສະນຸກເກີແມ່ນຫຍັງ?
ໃຫ້ເບິ່ງປະເພດຂອງສະນ້ໍາປະເພດ, ປະເພດ, ລະບົບສະນຸກເກີ, ກອງນ້ໍາ, ສູບນ້ໍາ, ອຸປະກອນສະນຸກເກີ, ເຄື່ອງອອກກໍາລັງກາຍແມ່ນຈໍາເປັນ.
1.1 สระสำเร็จรูป เป็นสระที่ประกอบด้วยวัสดุง่ายต่อการผลิตและการ ติดตั้งเช่น ผนังโลหะแผ่นไฟเบอร์กล๊าส เป็นต้น ทำให้มีราคาถูก ແຕ່ມັນມີຊີວິດຈໍາກັດ. ຕ້ອງການ spare
1.2 ສະນຸກເກີແມ່ນສະລອຍນ້ໍາທີ່ໃຊ້ມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ. ລາຄາແມ່ນສູງກວ່າແຕ່ມັນທົນທານຕໍ່ການນໍາໃຊ້ສູງ. ຕະຫຼອດຊີວິດຍາວ
2 ສະນຸກເກີແລະລອຍນ້ໍາບ້ານ (ສະນຸກເກີເນື້ອທີ່ເຫືອກເອກະຊົນ, ສະໂມສອນທົ່ວໄປ) ຂະຫນາດແລະຮູບແບບ. ມີການຈັບຄູ່ປະເພດສະນ້ໍາແບບມາດຕະຖານ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງກົດລະບຽບແລະມາດຕະຖານ
3 ສະລອຍນ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງລະບົບ, ຄື
31 ລະບົບໂດຍໃຊ້ກ່ອງ Skimmer Skimmer. ຈຸດຂອງນ້ໍາລົ້ນ, ຝຸ່ນຢູ່ດ້ານໃນ, ການ
overflow 3.2 ລະບົບ [Overflow System] ເປັນ overflow ລອຍນ້ໍາກິນເຖິງຝຸ່ນຢູ່ດ້ານເທິງຂອງປາກອ້ອມຂ້າງໄດ້ລ້າງຖັງແລະຫມຸນວຽນຜ່ານລະບົບການຕອງການກັບຄືນໄປບ່ອນ
4. ອຸປະກອນລອຍນ້ໍາ [ສະລອຍນ້ໍາອຸບປະກອນ] ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນສະນຸກເກີ
Maindrain, pool or wall cleaner, vacuum cleaner, skimmer or ລົ້ນ gutter grill [Overflow Grating], ຂັ້ນ, ສະນຸກເກີ [Ladder], ໄຟໃຕ້ນ້ [100/300 watt Underwater Light], ຊຸດ nozzle ຫຼືເປັນຊຸດສໍາລັບການເຮັດສະປາ
5. ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນ / ຕົກແຕ່ງ /. Player / ຊຸດປະກອບດ້ວຍສູນຍາກາດທໍາຄວາມສະອາດ grout, ແປງ scrub, ລ້າງຖົງ, ນ້ໍາຢາ, ການທົດສອບນ້ໍາໄດ້, ຄໍລີນ – ໂຊດາແອດ – ອາຊິດ hydrochloric, ສະຖານະພາບ, ນ້ໍາພຸ, Slider, ນອນອາກາດ, ຕາຕະລາງ, ປະທານ, ສະລອຍນ້ໍາໃນລົ່ມ, ເຮືອຊ່ອຍຊີວິດ.
ຮວບຮວມສະລອຍນ້ໍາແມ່ນໂລ້ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ມີຢູ່ໃນຫຼາຍສີ, ຂະຫນາດແລະແບບຕ່າງໆ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜະລິດໂດຍການນໍາໃຊ້ຂະບວນການສີດເຂົ້າແລະສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານສະພາບອາກາດສູງສຸດ. ການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ gratings ອະນຸຍາດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງໄດ້ງ່າຍແລະການກໍານົດຄວາມຍາວ. ຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການສະອາດແລະຮັກສາແລະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ UV ສໍາລັບຊີວິດການບໍລິການຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ. ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດງໍໄດ້ງ່າຍກວ່າມຸມແລະສະເຫນີໃຫ້ສໍາເລັດຮູບ. ການປະສົມປະສານແມ່ນມີຢູ່ໃນການເລືອກສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມສະນຸກເກີຄວາມຕ້ອງການ. ເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼຂອງນ້ໍາຈາກສະລອຍນ້ໍາ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຜະລິດໂດຍນໍາໃຊ້ຖົງພາດສະຕິກຫຼືເຫຼັກສະແຕນເລດສູງທີ່ມີການອອກແບບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສະອາດຂອງນ້ໍາໃນນ້ໍາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບລະບາຍນ້ໍາຂອງສະລອຍນ້ໍາໄດ້ງ່າຍ. ຄຸນນະສົມບັດພິເສດຢືນຢັນການອອກແບບແລະຄຸນນະພາບຂອງປະເທດທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່ຕ້ານຄວາມລຽບແລະສະດວກສະບາຍ. ມີຢູ່ໃນສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ UV ຮັບການປິ່ນປົວເຮັດດ້ວຍ polymer ຮ່ວມ. ມີຂະຫນາດແລະສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການອອກແບບ molded injection ເຮັດໃຫ້ມັນສໍາເລັດຮູບທີ່ດີເລີດ. ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະງ່າຍຕໍ່ການສະອາດ. ຄວາມສູງ, ຄວາມກວ້າງແລະຄວາມຍາວ: ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາຊ່ອງທາງທີ່ເຕັມໄປທົ່ວສະລອຍນ້ໍາ. ພວກເຮົາສະເຫນີຫນອງນ້ໍາໃນຂະຫນາດຕ່າງໆ. ຮວບຮວມນ້ໍາມີຊ່ອງຫວ່າງພຽງພໍລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານ້ໍາສະນ້ໍາເຕັມໄປສູ່ການໄຫຼລົງແຕ່ວ່າຕີນຂອງຄົນບໍ່ໄດ້ຮັບພາຍໃນມັນ. ການເກັບຮັກສານ້ໍາສະລອຍນ້ໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຮັດດ້ວຍການສີດພາດສະຕິກສີດ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫນັກແລະແຂງແຮງພໍທີ່ຈະຮັບນ້ໍາຫນັກຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍການອອກແບບຕ້ານຄວາມລຽບແລະສະດວກສະບາຍຫລາຍ. ມີຢູ່ໃນສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຮັດດ້ວຍ poly-polymer ການປິ່ນປົວ UV. ມີຂະຫນາດແລະສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການອອກແບບ molded injection ເຮັດໃຫ້ມັນສໍາເລັດຮູບທີ່ດີເລີດ. ການຕິດຕັ້ງແລະການເຮັດຄວາມສະອາດງ່າຍໆ. ເຫມາະສົມກັບນ້ໍາມັນທີ່ສູງແລະກວ້າງຂື້ນສູງ, ຄວາມກວ້າງແລະຄວາມຍາວ: ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສານເຄມີແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບໄຫລຂອງນ້ໍາແລະສະປາ ການເກັບຮັກສານ້ໍາສະລອຍນ້ໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຮັດດ້ວຍການສີດພາດສະຕິກສີດ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫນັກແລະແຂງແຮງພໍທີ່ຈະຮັບນ້ໍາຫນັກຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍການອອກແບບຕ້ານຄວາມລຽບແລະສະດວກສະບາຍຫລາຍ. ມີຢູ່ໃນສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຮັດດ້ວຍ poly-polymer ການປິ່ນປົວ UV. ມີຂະຫນາດແລະສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການອອກແບບ molded injection ເຮັດໃຫ້ມັນສໍາເລັດຮູບທີ່ດີເລີດ. ການຕິດຕັ້ງແລະການເຮັດຄວາມສະອາດງ່າຍໆ. ເຫມາະສົມກັບນ້ໍາມັນທີ່ສູງແລະກວ້າງຂື້ນສູງ, ຄວາມກວ້າງແລະຄວາມຍາວ: ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສານເຄມີແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບໄຫລຂອງນ້ໍາແລະສະປາ ການເກັບຮັກສານ້ໍາສະລອຍນ້ໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຮັດດ້ວຍການສີດພາດສະຕິກສີດ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫນັກແລະແຂງແຮງພໍທີ່ຈະຮັບນ້ໍາຫນັກຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍການອອກແບບຕ້ານຄວາມລຽບແລະສະດວກສະບາຍຫລາຍ. ມີຢູ່ໃນສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຮັດດ້ວຍ poly-polymer ການປິ່ນປົວ UV. ມີຂະຫນາດແລະສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການອອກແບບ molded injection ເຮັດໃຫ້ມັນສໍາເລັດຮູບທີ່ດີເລີດ. ການຕິດຕັ້ງແລະການເຮັດຄວາມສະອາດງ່າຍໆ. ເຫມາະສົມກັບນ້ໍາມັນທີ່ສູງແລະກວ້າງຂື້ນສູງ, ຄວາມກວ້າງແລະຄວາມຍາວ: ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສານເຄມີແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບໄຫລຂອງນ້ໍາແລະສະປາ ການຕິດຕັ້ງແລະການເຮັດຄວາມສະອາດງ່າຍໆ. ເຫມາະສົມກັບນ້ໍາມັນທີ່ສູງແລະກວ້າງຂື້ນສູງ, ຄວາມກວ້າງແລະຄວາມຍາວ: ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສານເຄມີແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບໄຫລຂອງນ້ໍາແລະສະປາ ການຕິດຕັ້ງແລະການເຮັດຄວາມສະອາດງ່າຍໆ. ເຫມາະສົມກັບນ້ໍາມັນທີ່ສູງແລະກວ້າງຂື້ນສູງ, ຄວາມກວ້າງແລະຄວາມຍາວ: ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສານເຄມີແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບໄຫລຂອງນ້ໍາແລະສະປາ
ມີສະລອຍນ້ໍາ, ເຮັດສວນ, ຍ່າງ, ຫນອງປາ, ຄອນໂດມິນຽມ, ຄອນໂດມິນຽມທົ່ວໂຮງງານ, ເຫມາະສໍາລັບໃຊ້ໃນເຮືອນ. ປະຊາຊົນຍ່າງຜ່ານຂະຫນາດມາດຕະຖານ 25x100cm ແລະ 30x100cm ເບົາ, ບໍ່ rust, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານການ. ຖ້າແດດຫຼືສານເຄມີມັກ. ຈະມີກອບທີ່ແຕກຫັກ.
ການອອກແບບພື້ນເຮືອນໂຮງງານ ເຮັດແນວໃດຊັ້ນສູງ? ການນໍາໃຊ້ທໍ່ພາດສະຕິກພີພີ. ການ
ນໍາໃຊ້ ທໍ່ຢາງ , ພື້ນ, ຂີ້ ຝຸ່ນ ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາທີ່ບໍ່ມີສານເຄມີ. ມັນດີກ່ວາເຫລໍກກົງ, ບໍ່ມີໂລ່ງ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍ.
Copolymer ຂອງ propylene (Polypropylene: PP)
ໂຄພໍລິເມີຂອງ propylene ເບິ່ງ opaque. ກ້ຽງກວ່າ Polyethylene ມັນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 0.890 ຫາ 0.905, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ມັນສາມາດລອຍຕົວໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັບ polyethylene ອື່ນໆເຊັ່ນ polyethylene. ຄຸນນະສົມບັດທົ່ວໄປ – ເປັນພຶ້ນທີ່ແຂງຕໍ່ຕ້ານຮອຍຂີດຂ່ວນຜິດປົກກະຕິແມ່ນບໍ່ຄົງທີ່ – ມັນສາມາດເປັນ hinge ໄດ້. ທົນທານຫຼາຍ – ເປັນ insulator ໄຟຟ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ – ໄມ້ທົນທານຕໍ່ຫຼາຍທີ່ສຸດກັບສານເຄມີ. ແຕ່ສານເຄມີບາງຢ່າງສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້. ຫຼືອ່ອນຂອງປາມັນ – ຄວາມທົນທານໃນອຸນຫະພູມຕັ້ງແຕ່ 105 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ 15 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ (40 ອົງສາເຊນຊຽດເຖິງ -10 ອົງສາ Celsius), ແຕ່ຢູ່0ອົງສາຟາເຣນຮາຍເປັນທັນເຂັ້ມແຂງ . – ການຕໍ່ຕ້ານກັບການແຊກຊຶມຂອງນ້ໍາ vapor ແລະອາຍແກັສດີ
– ສາມາດທົນກັບອຸນຫະພູມສູງທີ່ໃຊ້ໃນການເຊັດນໍ້າ. (ການເຮັດຫມັນ: 100 C) ມີ
– ປະສົມປະສານສີແມ່ນທັງສອງລັກສະນະ opaque ແລະ translucent.ແຜ່ນພາດສະຕິກ ມີລາຄາຖືກກວ່າເຫຼັກແລະເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ (FRP) ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບປະເພດອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດ. ສັດລ້ຽງໃນຟາມອ່ອນໆບໍ່ມີກິ່ນຫອມ, ປະຫຍັດເວລາຕິດຕັ້ງ. ການຕິດຕັ້ງສາມາດຍ້າຍໄປຫາສະຖານທີ່ອື່ນ.
ການຄວບຄຸມການໄຫລວຽນຕ້ານການແຜ່ກະຈາຍ PP ຂອງແມ່ນ້ໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງສະລອຍນ້ໍາທີ່ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍສູງສຸດຕໍ່ຕີນແລະຄວາມທົນທານທີ່ດີເລີດ. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບການອອກແບບມາໃນປະເທດໄທຈາກວັດສະດຸທີ່ມີການປ່ຽນແປງຈາກອຸນຫະພູມທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງສະນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາຂອງພວກເຮົາທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະທົນທານ. ພວກເຂົາຖືກອອກແບບມາໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງສະລອຍນ້ໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. PVC ຄຸນນະພາບສູງ, ທົນທານຕໍ່ກັບຜະລິດຕະພັນເຄມີ, ການດູດຊຶມສຽງ, insulating, ສະດວກສະບາຍແລະການອອກແບບ; ທົນທານຕໍ່ກັບຮັງສີ UV, ມັນສາມາດນໍາໃຊ້ທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ; ການຕິດຕັ້ງໄວແລະງ່າຍດາຍ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພະນັກງານພິເສດ; ງ່າຍທີ່ຈະເອົາອອກເນື່ອງຈາກບໍ່ມີກາວທີ່ຕ້ອງການ; ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ campgrounds, trailers, ລົດຕູ້, ຂັ້ນຕອນ, ຮ້ານຄ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນ, mini-clubs, ສູນການດູແລເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ສະນຸກເກີ, gyms,
ຂໍ້ມູນສະລອຍນ້ໍາປະເພດນ້ໍາປະກອບແມ່ນສ້າງຂື້ນເພື່ອໃຫ້ສາມາດຂຸດຂື້ນຜ່ານຊ່ອງທາງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຕົນເອງ. ສະນັ້ນບໍ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມ. ຄວາມກວ້າງຂອງໂປຣແກຣມສາມາດຖືກປັບແຕ່ງພາຍໃນຂອບເຂດ, ຂອບຂອບມາດຕະຖານທີ່ມີຢູ່: ມຸມສ້ວຍມຸມສາກ, ມຸມຂວາ, ຫຼືການແກ້ໄຂຂອບອື່ນໆສໍາຫລັບມຸມ miter 90 ທີ່ມີອົງປະກອບຍ່ອຍສັງເຄາະຫຼືສະແຕນເລດ. ວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ສໍາລັບທໍ່ນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາ ASM-Profile FSR ບໍ່ປະກອບມີອຸປະກອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃດໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼືສານພິດທີ່ບໍ່ເປັນພິດຕໍ່ເວລາ. ຮູບແບບຕ່າງໆແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າຈາກ formaldehyde, asbestos, HCH, PCB, PCP ແລະ CFC. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງບໍ່ເສຍຄ່າຈາກ cadmium, ນໍາແລະບໍ່ມີ monomers, biocides ຫຼື plasticisers. ອຸປະກອນການພື້ນຖານແມ່ນອະນຸຍາດສໍາລັບການຕິດຕໍ່ອາຫານ. ຮວບຮວມສະລອຍນ້ໍາ ASM-Profile ໄດ້ຮັບການທົດສອບສໍາລັບຄວາມຜິດພາດທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບຕາມ DIN 51097 ກຸ່ມທີ່ຖືກຕ້ອງ B ທີ່ອ້າງອີງໃສ່ອາຊິດ. ການທົດສອບໂດຍ “Fliesenleger-Vereinigung EV” ໃນ 22.10.2014, ນີ້ໄດ້ຮັບປະກັນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໂປຣໄຟລດຽວ. ຊີວິດການດໍາເນີນງານທີ່ຍາວນານແລະລັກສະນະທໍາຄວາມສະອາດທີ່ສຸດຂອງສະນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາ FSR ແມ່ນຮັບປະກັນໂດຍການປະທັບຕາແລະບໍ່ມີນ້ໍາທີ່ມີນ້ໍາສະບູ.
ສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາປອດໄພ, ສຸຂະອະນາໄມ & ທົນທານ Grates ສໍາຫລັບສະລອຍນ້ໍາແລະການໃຊ້ທໍ່ນ້ໍາ ສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາມີຄວາມສະດວກໃນຕີນແລະສະດວກສະບາຍ. ຮວບຮວມ overflow ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນສະນຸກເກີນ້ໍາສາທາລະນະແລະເອກະຊົນ, ແລະເກັບກໍານ້ໍາ overflow ທັງຫມົດ incidental ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດດໍາເນີນການປະມານ perpendicular ຫຼືຂະຫນານກັບແຂບຂອງສະນຸກເກີແລະສາມາດປັບຕົວກັບຮູບຮ່າງຂອງສະນຸກເກີຮູບແບບຟຣີ, whirlpool ຫຼືສະນຸກເກີຮູບສີ່ແຈສາກ. ບໍ່ວ່າທ່ານເລືອກໃດກໍ່ຕາມ, ສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາສະດວກສະບາຍສໍາລັບຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະອະນາໄມແລະຄວາມທົນທານ. ປະເພດຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນທັງຫມົດມີປະທັບຕາຄວາມປອດໄພແລະໃບຢັ້ງຢືນທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິການ, ແລະຮັບປະກັນການສໍາເລັດຮູບຢ່າງສົມບູນ. ເລືອກສະລອຍນ້ໍາຂອງທ່ານຮູ້ບຸນຄຸນໃນປັດຈຸບັນຈາກຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
14. HDG ການກັ່ນຕອງຂີ້ເຫລໍກ clip lock clutch fastener clip clip ຈັບ grip ຈັບ grip
ຊັ້ນ walkway Mat, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, # ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manholes COVER, #Swimming Overflow ບາຍນ້ໍາ Gully Gutter Grating, #Anchoring ອຸປະກອນທີ່ຕິດຄັດມາ Saddle ແກ້ໄຂ Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating, # ລັກສະນະ. ອຸປະກອນລັອກຄລິບຍຶດແຜ່ນ sieve, #Curbed ບາຍນ້ໍາ grating Scupper, ຈັ່ນຈັບ # sieve ໃບຂີ້ເຫຍື້ອກ່ຽວກັບການ sidewalk ຂ້າງຂ້າງການຄວບຄຸມໄດ້, #Egg Crate, # ອອກຕັນຫນ້າກາກຫນ້າຈໍກະດານ, #FRP Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນກວມເອົາ Protector #FRP ຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ. gritted ແຜ່ນແຜ່ນ # ອັດດັງແລະມຸມ trim ໄດກະດານການປົກຫຸ້ມຂອງ. # Sheet ພື້ນຜິວພື້ນເສັ້ນໃຍຄວາມຜິດພາດພຽງແກ້ວ, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking ການເກັບຮັກສາເຄື່ອງມື DIY Kit, ຫມູ່ຄະນະເຫຼັກບອດ # plank Peggy perforated ກໍາແພງ hook hanger ຂາສາຍເບັດ.
#Grating Manhole ກວມເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ
GFRP Composite ແມ່ນ Steel ຂອງ Gully Scupper, ຖະຫນົນລົດແລ່ນຕະແກງຍ່າງ , Culvert ການ Conduit Trench ,, ບາຍນ້ໍາ Ditch ນີ້, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດພ້ອມ, ຫນຽວສໍາລັບທາດເຫຼັກ Manhole ກ່ຽວກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກວມເອົາຈັບ A ອ່າງ, ຍົກຂຶ້ນມາເຂົ້າໄດ້ໃຊ້ຊັ້ນທາງຍ່າງ, ຕີນ, ພາທະນາຍຄວາມແມ່ນຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ຍຶດໄດ້ Clip Table Saddle Lock ທີ່ສໍາຄັນ Clamp ດັດ Fastenal ໄດ້ Anchor ກ່ຽວກັບ Fastener ລັອກແຜ່ນຕິດຕັ້ງ. ປີ້ງກະດານ, formwork ຜູກ Rod ເປັນຂຸຍ WaterStopper Anchorage Wingnut , ເດັກຫລວງ ductile ເຫລໍກທໍ່ຊິນເສັ້ນໃຍຫລວງ, lid ປິດຖັງຂອງ Holger Hansen ໂຮນດິ້ງ, ຫລວງທໍ່ cover ການກັ່ນຕອງຫນອງຂ້າເຊື້ອ, ຫລວງ. ການລະບາຍນ້ໍາ Bile, ແຜ່ນປູ ການຮູ້ບຸນຄຸນ, Great Tasting, ເຫຼັກ grill lid ການເຂົ້າເຖິງຕົວ, ກອບປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງຕົ້ນໄມ້, ແຄມ, ດັງ, eyebrow ຄວາມຜິດພາດພຽງກະດານໄດປົກຫຸ້ມດັ່ງກ່າວ.
ເຄື່ອງມືການເກັບຮັກສາອຸປະກອນການເຊື່ອມໂລຫະແລະອຸປະກອນການກັ່ນຕອງ Beko ຜະລິດຕະພັນ (25) ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ: ອຸປະກອນການປົກປັກຮັກສາການໄດ້ຍິນ (16) ຮົ່ວ & ການຄວບຄຸມນໍ້າມັນຮົ່ວໄຫຼ: ເຄື່ອງດູດຂອງແຫຼວທີ່ອັນຕະລາຍຂາ Hook ສາຍ hook ຫ້ອຍໃສ່ສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງຕົນ, ການຜະລິດພືດ # Pegboard. ແຜງອະລູມິນຽມ, ແຜ່ນເຫລໍກ Hole in ການອອກແບບຝາເຮືອນຄົວໂຮງງານຜະລິດແບບອຸດສາຫະກໍາ, # plank ໄມ້ເຫຼັກແຜ່ນຮູກອບເປັນຈໍານວນ. ຫ້ອຍເຄື່ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື Wall Holder Rack Hard Board ບາດວິຖີບາຍນ້ໍາ Grating Scupper ຈັ່ນຈັບ sieve ສິ່ງເສດເຫຼືອໃບດ້ານຄວບຄຸມຢູ່ແຄມ sidewalk ໄດ້, ນ້ໍນ້ໍາ scupper ບາຍຂ້າງຫນ້າຈໍຂີ້ຝຸ່ນຖະຫນົນ grating ຖະຫນົນທາງຫລວງຈະລາຈອນ, trapper ໃບ scupper ຄວາມປອດໄພຕະແກງຈະລາຈອນລະບາຍຕາມຂ້າງ. ທາງຫລວງ, ການປົກຄອງຄວບຄຸມທີ່ມີ inlet ຮູ້ບຸນຄຸນແລະກ່ອງເດັກຈັ່ນຈັບ weir ແຍກ debris ກະຕັນຍູ comb ທີ່ເລື່ອນໄດ້ໃນນ້ໍາໃນຂອບຂອງ sidewalk ໄດ້. Sediment ດັກຝຸ່ນ, ໃບ, ເອກະສານ, ເສດອາຫານກ່ອງຄວບຄຸມ, ປີ້ງເສີມນ້ໍາສີມັງ,. ເຄິ່ງຫນຶ່ງຫົວເຕັມ ເສັ້ນທາງຫລວງ U ຢູ່ທາງຂ້າງຂອງທາງຕີນ, ການກໍານົດໂດຍມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ທາງດ່ວນຂອງໄທ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານແຜ່ນພາດສະຕິກຫລີກລ່ຽງນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາ. Substrate PVC substrate, PE PVC ສະລອຍນ້ໍາພາດສະຕິກ, ຕີນ, paving, ການສະຫນັບສະຫນູນສິນຄ້າຈາກສາຍແອວ conveyor, ພູອື່ນໆແລະສວນ. ເຂດອາຈົມໄຟຟ້າ, ຂັ້ນຕອນການແຂ່ງຂັນ, ທົ່ງຫຍ້າ ສາຍທໍ່ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການອອກແບບທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ສາມາດຕັດແລະຕົກແຕ່ງເປັນເຟີນິເຈີ, stencil, ກໍາແພງ, stencil, ອົງປະກອບອອກແບບ, ສວຍງາມແລະເປັນເອກະລັກ. ຫຍ້າທ່ອນໄມ້ ສາຍທໍ່ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການອອກແບບທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ສາມາດຕັດແລະຕົກແຕ່ງເປັນເຟີນິເຈີ, stencil, ກໍາແພງ, stencil, ອົງປະກອບອອກແບບ, ສວຍງາມແລະເປັນເອກະລັກ. ຫຍ້າທ່ອນໄມ້ ສາຍທໍ່ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການອອກແບບທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ສາມາດຕັດແລະຕົກແຕ່ງເປັນເຟີນິເຈີ, stencil, ກໍາແພງ, stencil, ອົງປະກອບອອກແບບ, ສວຍງາມແລະເປັນເອກະລັກ.
ວັດສະດຸຜະ Aluminum, F. RP, corrosion ທົນ rust, ຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ, ອາຊິດ, ເປັນດ່າງ, ສານເຄມີ, ພະລັງງານການປະຫຍັດ, ບໍ່ມີອາການບວມ, ປອດສານພິດຫນ່ວງທີ່ບໍ່ແມ່ນໄຟ, ໃຍແກ້ວຫລືໃຍແກ້ວພິເສດແມ່ນ, Pantip. siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, ສາມາດພິເສດກົມສະຖິຕິ mch, SCG ໂຮມໂປ Depot Watsadu, repairing ເຮືອນ, ອຸປະກອນ, ການເຄືອບພື້ນຜິວ, epoxy, E. ງ່າຍ Pot, E c ງ່າຍ Pot, epoxy ຊັ້ນ. ໂພລີຍູລີເທນ, ກາວ PVC, ຊີວະພາບຊີວະພາບ, PE PU, ເຄືອບ, ແຂໍງແຂງ, ການປັບປຸງພື້ນທີ່ອຸດສາຫະກໍາ ໂຮງແຮມເຮືອນຄົວ, ້ໍາສ້າງເຄືອບ, ສານເຄມີ, ທົນທານຕໍ່, ສີ acrylic, ການສ້ອມແປງ, crack ປະທັບຕາ, ການເຄືອບ, ຊຶມ, ສຽງ, ສານເຄມີສະນຸກເກີ, ໃຍແກ້ວ gutter, ແຜ່ນໂລຫະມຸງ, ເຫຼັກອຸປະກອນການທົດແທນ. , ປອມ, ສັງເຄາະ, ປອດສານພິດ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ອຸປະກອນ, Fla drains ເທິງຫລັງຄາ, ດ້ານການປ້ອງກັນພັຍ, overflow gutter ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີ, ແຜ່ນແບນມື້ຄ່ໍາຊັ້ນ, ພື້ນຢາງປະມານເຄື່ອງ podium ໄດ້, trays pallet ໄດ້. ຕາຕະລາງ, ຊັ້ນ ແມ່ທ້ອງ block ປູຫຍ້າອອກແບບ. Yankee bar, ລະບາຍນ້ໍາຢູ່ຕີນຂອງທາງຕີນ, Yat, Yarage, ມີລະບົບລະບາຍນ້ໍາ, ສາຍນ້ໍາເຫຼັກທຽນ, ບີບປາຍ, ເສັ້ນໄຍຄາບອນ, slope slippery, railing, mini net, ຕັນກິ່ນ, ຖະຫນົນຫົນທາງ, decorate ຫນອງປາ, ພູມສັນຖານ, ກະເບື້ອງ, ພື້ນເຮືອນ, ປັບປຸງ feng shui, DIY ການຕິດຕັ້ງ ງ່າຍທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງ, ຊື້ຢູ່ Splashboard / Weatherboard / Slat blinds / Trellis shade, Awning Wall Panels, ຫ້ອງປະຊຸມ, ສັບພະສິນຄ້າ, ໂຮງຮຽນ, ແລວເສດຖະກິດ, ຫ້ອງນ້ໍາຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງຫມໍ, ວຽກກໍ່ສ້າງໃຫມ່, Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຜົນປະໂຫຍດ awnings ຕົກແຕ່ງຜ້າມ່ານ slatted cedar pergola Fiat hinges breeze, ປ້ອງກັນສັດປີກ cover mesh, ງູ, ນົກຊະນິດ, ກະຮອກ baffles ໄລ່ອອກ, ປະກອບເປັນຫມູ່ຄະນະແບ່ງປັນ. Delight, polycarbonate, vinyl, block ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ລະບຽງ staircase ຂະຫນາດແຜ່ນ stencil. ຫມູ່ຄະນະອອກແບບປິດລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດ, ສາຍໄຟ, ເປັນ divider ຫ້ອງ, ສູງເກຣດ. ອາຄານທີ່ສວຍງາມສອງເທົ່າ Polycarbonate vinyl, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການຫ້ອງນ້ໍ, balcony, staircase, stencil, ຫຼາຍຂະຫນາດ ລະບົບປັບອາກາດ, ຫ້ອງພັກ, ຄຸນະພາບສູງເກດ A ອາຄານທີ່ສວຍງາມສອງເທົ່າ Polycarbonate vinyl, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການຫ້ອງນ້ໍ, balcony, staircase, stencil, ຫຼາຍຂະຫນາດ ລະບົບປັບອາກາດ, ຫ້ອງພັກ, ຄຸນະພາບສູງເກດ A ອາຄານທີ່ສວຍງາມສອງເທົ່າ
GFRP Composite ເພັດ Top Manhole ປົກ Checker Plate ພື້ນຜິວ (ຫນາ grill lid ປິດຂີ້ເຫຍື້ອການປົກຫຸ້ມຂອງທໍ່ນ້ໍ Fiber Glass Mat) www.chancon.co.th. ໄຂ່ Polystyrene ສີຂາວສໍາລັບການກັບຄືນອາກາດແລະລະບາຍ ຕົກແຕ່ງຕູ້ປາ EggCrate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ, ອາກາດ vector ຄືນ acrylic HVAC / deflection Double Grid ອາກາດ, vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກະດານສໍາລັບການສະກັດແສງສະຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງ. ຈາກ LED / Fluorescent Lamps (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. A ຄະນະກໍາມະ delineated ໂຄງສ້າງກໍາແພງກະດານ container ຫນອງນ້ໍາ, ກຸ້ງ, ກົບ, ຊາລາແມນ. ອຸປະກອນແສງສະຫວ່າງ ຕົກແຕ່ງຕູ້ປາ EggCrate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ, ອາກາດ vector ຄືນ acrylic HVAC / deflection Double Grid ອາກາດ, vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກະດານສໍາລັບການສະກັດແສງສະຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງ. ຈາກ LED / Fluorescent Lamps (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ຖັງກຸ້ງ, ກົບ salamander. ອຸປະກອນແສງສະຫວ່າງ ຕົກແຕ່ງຕູ້ປາ EggCrate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ, ອາກາດ vector ຄືນ acrylic HVAC / deflection Double Grid ອາກາດ, vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກະດານສໍາລັບການສະກັດແສງສະຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງ. ຈາກ LED / Fluorescent Lamps (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ຫນອງ, ຕູ້ປາ, ຖັງກຸ້ງ, ກົບ salamander. (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດແຜງຫນ້າຈໍຝາຄອບແຜ່ນປິດຝາຄອບ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. A ຄະນະກໍາມະ delineated ໂຄງສ້າງກໍາແພງກະດານ container ຫນອງນ້ໍາ, ກຸ້ງ, ກົບ, ຊາລາແມນ. vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງສະຖານທີ່ຄະນະກໍາມະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນແສງສະຫວ່າງຈາກໂຄມໄຟ LED / ສະທ້ອນແສງເຊນ (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດແຜງຫນ້າຈໍຝາຄອບແຜ່ນປິດຝາຄອບ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ. ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. A ຄະນະກໍາມະ delineated ໂຄງສ້າງກໍາແພງກະດານ container ຫນອງນ້ໍາ, ກຸ້ງ, ກົບ, ຊາລາແມນ.
ຜະລິດຕະພັນ FRP, GFRPS, Glass Fiber Reinforced Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass ຝາອັດປາກຂຸມ, ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Composite, ້ໍາຢາງ vinyl ester, bollards ຮາກລໍາຕົ້ນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຖະຫນົນຫົນທາງຂຸມ sculpture ຄວາມປອດໄພໃນການອອກແບບ, ທັດ Exterior Garden gratings ຕົ້ນໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ Ring ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງກອງ Grating Paver ຕົວຖ່ວງແຮນ. ຍ່າງຕາມຖະຫນົນຖະຫນົນ, molded, pultrusion, ໂປຣໄຟລ໌ pultuded, ກວມເອົາຮອຍບາເກິດສົມ gratings, Cage Ladders, treads Staircase nosing, ບໍ່ stairways ຄວາມຜິດພາດພຽງ skid ຕ້ານ, ຂັ້ນຕອນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ການປົກຫຸ້ມຂອງ tread, Handrail, Structural ຮູບ, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ catwalks, ພື້ນ garage double. , ການປົກຫຸ້ມຂອງນ້ໍ, ditch, ຄວາມປອດໄພຂະຫຍາຍໂລຫະ Grating, ຫນັກຍົກເວັ້ນພາສີ Grip ບາຍ Channel, perforated ໄຫຼແອອາລູມິນຽມ, ເດີ່ນ Ramp Edging Pedestal, Carbon ບາເປັນແສກແຂ້ວເລື່ອຍ Steel, ຮາງນ້ໍາຫຸ້ມ, ສະຫນັບສະຫນູນສື່ມວນຊົນ, ຕາຫນ່າງທາງອາກາດ, ລາງລົດໄຟ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼາຍ, ການຄຸ້ມຄອງ, ເວົ້າ. , gritted,minimesh, resin polyester unsaturated, ປ່ອງປ່ອງແບ່ງປັນປ່ອງຢ້ຽມ, ເວທີການດໍາເນີນງານ, ພື້ນຖານປ້ອງກັນການລະເບີດ, ຕາຫນ່າງຫລຸມຂຸມ, ການເຄືອບ, ສີມັງ, Polyurethane, ຂັດ, Epoxy ລະດັບຕົນເອງ, ເສັ້ນທາງຊັ້ນ, ເສັ້ນໄຍກາກບອນ, ແຂງຊັ້ນ, Grouting, ກັນນ້ໍາ, ການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍ, tower Cooling ປຽກ, ຖັນ, Laminate, ໂລຫະ, ອະລູມິນຽມຄອມໂພສິດ, Rack, conductor, skylight. , polycarbonate, ຢາງ, acrylic, RGB, ABS, PS, PC, exotic PET, ແຜ່ນ Flat, translucent, ຕ້ານການ UV ເສຖີຍນ, ຕົກແຕ່ງແຜ່ນແຂງ, gutter, ditch, ເຮັດສິນຄ້າຕາມ fabricators ມືອາຊີບ, ຊຸບຮ້ອນ tinplate Electro forge Galvanized ,. ທອງແດງສັງກະສີ, ການສະຫນອງ, ອາຫານ, ນ້ໍາຫນັກຕໍ່ເມັດ,ມິຕິຖານ, ການຕັດຕາຕະລາງການໂຫຼດ, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ, ອຸດສາຫະກໍາ, ຜູ້ສະຫນອງ, Foundry, ທີ່ດໍາເນີນໃນປະເທດຈີນ, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, ອາຫານແລະຢາອະນຸມັດ, ລາຍການລາຄາກໍາຫນົດສໍາຫລັບການຂາຍ, Infosoft.
CHANCON PROFILE / ຜະລິດຕະພັນ Shannon Airport
Shannon ສະຫນາມບິນພິເສດຜູ້ຜະລິດ. ລະບົບທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ Paving slabs Step ladder ເກີບ Lightweight Lids wash ທໍ່ນັ້ນກວມເອົາຂີ້ເຫຍື້ອ. ແຜ່ນເຫຼັກຊັ້ນໃນເດີ່ນຫຼາຍ Paving mat ລະບົບການປິ່ນປົວນ້ໍາປະປາສ່ວນເທິງແມ່ນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນເນື່ອງຈາກມີໂລຫະແລະສານເຄມີ. ກວມເອົາຕະແກງແລະ Bo ສໍາເລັດກວມເອົາ Manhole ຜູ້ຊ່ຽວຊານຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ Grating
1. polypropylene (PP ໄດ້) ປະເພດ Plastic ປີ້ງຢາງແຂງຮູ້ບຸນຄຸນສໍາເລັດ. PP plating grating ບັນດາກະແສການລະບາຍນ້ໍາຫນັກເບົາແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າຍ່າງກ່ວາເຫລໍກ.
ກ່ອງພາດສະຕິກ ABS ມີຂະຫນາດມາດຕະຖານຂະຫນາດ 25cm ແລະ 30cm ມີສອງຊັ້ນທີ່ມີຄຸນະພາບທີ່ຈະເລືອກເອົານ້ໍາຫນັກເບົາ, ບໍ່ແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຈະຜ່ານຄົນ. ລາຄາຖືກທີ່ສຸດ ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນລົ່ມ. ອ້ອມຂ້າງສະລອຍນ້ໍາ ຮ້ອນຊ້ວນ galvanized ເຫລໍກຮ້ອນ galvanized ແຜ່ນເຫຼັກ. ຂໍ້ເສຍປຽບແມ່ນການຂີ້ເຫຍື້ອ. ແລະລັກຂະຫນາດ 25x100cm. ແລະ 30x100cm. 4. FRP, Fiberglass Grill / Mold grating ເສັ້ນໃຍຮູ້ບຸນຄຸນແກ້ວ, reinforced ຊິນ.
“ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ FRP” ແທນເຕົາລີດ / ສະແຕນເລດເຫຼັກ Thief ບໍ່ຕ້ອງການ ການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍດາຍ ຊີວິດຂອງ 50-100 ປີແມ່ນເປັນເອກະສານທາງເລືອກໃຫມ່. ເລືອກສີທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ແຜ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ 1.5x4M ສໍາລັບພື້ນເຮືອນ. Designed for use as ໃສ່ກັບດັກຂີ້ເຫຍື້ອ, ຕົວແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ, ດັກໃບ, ແກນຂ້າງຕາມເສັ້ນທາງທາງຫລວງ. ອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ຖະຫນົນຊົນນະບົດແລະບາງກອກ. 6. Cast ພ້ອມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ຫນຽວແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ທໍ່ ductile Manhole ກວມເອົາການປົກຫຸ້ມຂອງ.
ຜະລິດຈາກ Ductile Cast Iron, ຜະລິດຕາມມາດຕະຖານ EN124, ທົດສອບໂດຍສະຖາບັນ TAFE ໄທ. ເລືອກຈາກຊັ້ນຮຽນຈໍານວນຫຼາຍຈາກ 2-40 ໂຕນ, ທັງສອງມີ hinges ແລະ lock ຕ້ານລັກ. ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະບໍາລຸງຮັກສາລາຄາຂາຍແມ່ນ 1 ຊຸດ, ລວມທັງການປົກຫຸ້ມດ້ວຍກອບ.
7 FRP Manhole Cover reinforced fiber reinforced concrete frame with frame. ຜະລິດຈາກວັດສະດຸ FRP reinforced fiber reinforced, EN124 ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອເຊັ່ນທາດເຫລໍກທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ເລືອກຈາກ 2-40 ໂຕນ, ງາມກັບທໍາມະຊາດ. ບໍ່ແມ່ນຄວາມນິຍົມໃນຕະຫຼາດທີ່ຈະຊື້ໃນອະດີດ undisputed ລັກ Crate 8 Egg Grille Diffuser Divider ໄຟຕູ້ປາ Panel ຮູ້ບຸນຄຸນແຍກໃນປ່ອງແສງສະຫວ່າງການປົກຫຸ້ມຂອງໄຟ. ງາມຕູ້ປາ
ການປົກຫຸ້ມຂອງຝາຄອບຝາຄອບຂອງຝາອັດປາກມົດອາກາດ ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນອຸປະກອນອອກແບບສໍາລັບປາງາມ. A ຄະນະກໍາມະ delineated ກໍາແພງຫີນໂຄງສ້າງບັນຈຸກະດານຫນອງນ້ໍາ, ກຸ້ງ, ກົບ, ຊາລາແມນ
9 PegBoard ສະແດງເຄື່ອງມື hooks Shelves ບອດແພງ Peggy ຄະນະກໍາມະ. ຂຸດເຈາະຮູໃນເຄື່ອງມືຕິດຕັ້ງກໍາແພງຫີນ. # ໂຮງງານຜະລິດ Pegboard. ແຜງອະລູມິນຽມ, ແຜ່ນເຫລໍກ ສະແດງເພດານສະແຕນເລດ Hooks Shelf Hanger Store ຈັດປະເພດເຄື່ອງມື, Plank Steel Plate ສໍາລັບລາຍການຫ້ອຍ, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຝາ Rack ເພື່ອ Holder ຄະນະກໍາມະການຊອກຫາ Hard ເຄື່ອງມື
10. FRP, Stair Tread ດັງປົກຂັ້ນຕອນຕົວຢ່າງ Protector ປົກຂອບດັງແຜງ cover ໃຍແກ້ວຄວາມຜິດພາດພຽງ ladder. ຫຼຸດຊັ້ນ Mat ໃຍແກ້ວບັນໄດຂອບດັງກະດານການປົກຫຸ້ມຂອງ trim. ອອກແບບເພື່ອທົດແທນ ພື້ນຢາງ playgrounds ອອກກໍາລັງກາຍ, ສວນສາທາ, ໂຮງຮຽນ, gyms, ທັງກາງແຈ້ງແລະໃນລົ່ມ
11 hdg / Stainless Steel Grating Anchor ອຸປະກອນ ທີ່ຕິດຄັດມາ Saddle ແກ້ໄຂ Clip Clamp Lock Fastenal Fastener ອຸປະກອນລັອກຄລິບແນ່ນອນດ້ານເຫຼັກແຜ່ນ sieve, ເຫລັກສະແຕນເລດ /. ຊຸບທົນທານຕໍ່ກັບ rust ເຫຼັກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄລິບລັອກຮູ້ບຸນຄຸນສະແຕນເລດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການໃຫ້ໃຍແກ້ວຫລືແຜ່ນສະແຕນເລດ. ແກນເຫລໍກສ່ວນປະກອບ zinc plated ແຕ່ລະແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອຕິດຕັ້ງແຜ່ນແກນເພື່ອພື້ນຖານດ້ານລຸ່ມ. ລະດັບສາມາດປັບໄດ້. ທັງສອງແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ. ທັງສອງ jigsaw ແລະສໍາເລັດ.
FRP ເຕົາເຫລໍກເຫລໍກພາດສະຕິກແຫວນໃຫຍ່ / ກອງ / ເກຍຄວາມປອດໄພຖະຫນົນກອບຂອບກອບຂອບສະຫນັບສະຫນຸນ ໃຊ້ສໍາລັບການຕົບແຕ່ງ ປູກຝຸ່ນເພື່ອຮັກສານ້ໍາງ່າຍ. ມັນຍັງປົກປ້ອງລົດໃນເວລາທີ່ແລ່ນຜ່ານ. ທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ Land Garden Scape. Tough tough Fiberglass slippery finished
FRP Manhole ປົກ Grating (Custom Made ກັບ ຄໍາສັ່ງສໍາລັບທຸກຂະຫນາດ) ເຕັກໂນໂລຊີຫລ້າສຸດ manholes ປົກຫຸ້ມຂອງ, ການລະບາຍ, ໃຍແກ້ວ. ອອກແບບມາເພື່ອທົດແທນແຜ່ນຝາເຫຼັກເສັ້ນດ່າງ TROTTERS ໄດ້. Bo ຕົ້ນສະບັບສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກສະບັບພາສາການປົກຫຸ້ມຂອງ
14 ເພດານເຕົາບາບີ Trellis ຮມົ່: ຜ້າມ່ານ Panel slatted ປີ້ງ separates ຕັນຫນ້າກາກໄຟຮົ່ມແສງສະຫວ່າງ decorate ຂອງຕູ້ປາ. Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ຕາບອດ ພັບບານພັບຝາ pergola: ປີ້ງລະບາຍອາກາດໂຈະໂຄງສ້າງເພດານ, Splashboard / Weatherboard / Slat ມ່ານ / Trellis ຮົ່ມ, Panels Awning Wall, ສີຫນ້າຈໍ General Partition Anti-Bird Control Netting, Mini ຕົກແຕ່ງ Grating Curtains, ປະຕິມາກໍາການປົກຫຸ້ມຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ເປີດເພດານສັບມືຖື.
15. Formwork / ກ່ຽວກັບແບບຟອມ Tie ເປັນອຸປະກອນເສີມ, ລະບົບ ສໍາລັບ Reinforced SLAB ຊັ້ນມັງ Wall ໃຊ້ອາຄານອື່ນ ໆ ກໍ່ສ້າງຫລໍ່ຂອງ TIES ໄມ້ໃນ Carpenter Design- ລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້: Dywidag ລູກຫມາກຂອງເຫຼັກ ROD ກັບກະທູ້ຕະຫຼອດເສັ້ນ (rod ວັດ) ໄດ້ + Wingnut (ປີກຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ) + ນ້ໍາຕໍາແຫນ່ງ + ໂກນເຫຼັກ. / Hole ເວັ້ນພື້ນທີ່ຕົວ Fiberglass FormTies / Scaffolding ລາຄາ ຊັບພາຍເອີ ປະເພດວົງເລັບໄມ້ທົນທານຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງ. ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ກັບ formwork ຂອງທຸກປະເພດ, ເຊັ່ນ: ການຮັກສາຝາທີ່ມີສີມັງ, ປະກອບດ້ວຍຮູບແບບເຫຼັກມໍຂະຫນາດໃຫຍ່ການແຂ່ງຂັນ Tyne, Wing ແກ່ນ, ຂໍ່ກະດູກ, ນ້ໍາ, ແກ່ນຂອງຫມາກໄມ້, ຫົກຂອງຄື້ນຟອງເຫຼົ່ານີ້ຄູ່ຮ່ວມງານ, ໄລປະຕູ, locks, ປວດຂໍ້ກະດູກຕອບສະຫນອງ. cheerful, ຮາກ, clamp ພາກຮຽນ spring, clamp wedge, ຖານພາດສະຕິກຂອງ girder ເຫຼັກກັບ poly ໂກນ ABS Spa ລອຍນ້ໍາຫລາຍເກີນ grating ລະບາຍຕັນກະຕັນຍູ. ແຜ່ນປົກສໍາຫລັບສະລອຍນ້ໍາໄຫລ້ໍາໄຫລ (ສີຄີມ)
GratingsIs ຂອງພວກເຮົາອອກແບບມາຢ່າງລະອຽດເພື່ອສົມທົບຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂອງອຸປະກອນແລະການສັກຢາ mounded ກັບຄຸນນະພາບທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງຕົນແລະປະສິດທິພາບເປັນການຍືດອາຍຸອາຍຸຜະລິດຕະພັນແລະມັນສາມາດທົນຕໍ່ຫຼາຍກ່ວາ 500KG ເປັນການທົດສອບໂດຍສິງກະໂປຜະລິດແລະມາດຕະຖານບໍລິຫານ. ຂໍ້ກໍານົດ, ຊັບສິນທາງຮ່າງກາຍແລະລັກສະນະ:
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Tough, ທົນທານແລະແສງສະຫວ່າງໃນນ້ໍາທົນໂຫຼດສູງ, ຜົນກະທົບສູງສຸດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ Rust ຟຣີ, ບໍາລຸງຮັກສາຟຣີ, ພື້ນຜິວຄວາມຜິດພາດພຽງທີ່ບໍ່ແມ່ນ, ຕ້ານການ Corrosion ກັບແສງແດດ (UV) ໂຈມຕີບາດຽວ mounded ກັບໄລປະຕູແລະແກ່ນຂອງຫມາກໄມ້ໃນແຕ່ລະດ້ານ. ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ fitting ກັບຄົນອື່ນ. ມັນອາດຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນທຸກໆມຸມຂອງການປະສົມປະສານທີ່ເຮັດໃຫ້ມຸມມົນ, 45? ຮ່ວມກັນ, 90? ຮ່ວມກັນແລະແລ່ນຊື່ ພື້ນທີ່ຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ບັງກະໂລ, ຄອນໂດມິນຽມ, ເຄິ່ງດ່ຽວ, Terrace ບ້ານ HDB, ເນື້ອທີ່ເຫືອກສະນຸກເກີໂຮງຫມໍ, ໂຮງແຮມ, ໂຮງງານ, ກອງປະຊຸມ, ສະຖານທີ່ຕະຫຼາດ, ສະຫນາມເດັກ, ພືດ Chemical.
ສ້າງຕັ້ງສະມາຊິກທີ່ຕ້ອງການສະນຸກເກີທີ່ເປັນມືອາຊີບທີ່ມີອຸປະກອນທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດອີກຕໍ່ໄປດ້ວຍຄວາມປອດໄພທີ່ດີທີ່ສຸດ. ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້ພວກເຮົາໃຊ້ພຽງແຕ່ວັດຖຸດິບທີ່ມີຄຸນນະພາບທໍາອິດແລະພວກເຮົາຜະລິດໃນອິຕາລີ. PVC, ABS ແລະ polypropylene copolymer, ມີປະສົມປະສານເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງຮັງສີ UV ແລະກາຍເປັນທົນທານຕໍ່ເຊື້ອແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ພວກເຮົາຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອໃນຂະຫນາດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ປອດໄພທຸກສະລອຍນ້ໍາ, ທັງຫມົດທີ່ມີອົງປະກອບຂະຫນານເພື່ອໃຫ້ນ້ໍາທີ່ດີທີ່ສຸດ. ອົງປະກອບທັງຫມົດເຄົາລົບນັບຖືກົດຫມາຍ FINA ແລະກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພ, ໃນການຕິດຕໍ່ກັບມາດຕະຖານ ROHS ແລະ REACH ຫະພາບເອີຣົບ. ຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງ FINA ແລະ UNI EN 13451.
Pool Swimming Overflow Spa Grating ພວກເຮົາຜະລິດສໍາລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສະລອຍນ້ໍາ, ທີ່ຖືກຍົກຍ່ອງໃນຕະຫຼາດສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ດີກວ່າແລະຄວາມທົນທານສູງຂອງຕົນ. ພວກເຮົາສະເຫນີຕ່າງໆ; ສະລອຍນ້ໍາທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນປະກອບດ້ວຍໂລຫະປະກອບດ້ວຍສີ, ຂະຫນາດແລະຄໍເຕົ້າໄຂ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງນ້ໍາທັງຫມົດຕາມແຄມນ້ໍາຂອງສະນຸກເກີ. ການໄຫຼຂອງນ້ໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍ້ອນການໂດດຫຼືລອຍນ້ໍາໂດຍນັກລອຍນ້ໍາ. ສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການສູງລະຫວ່າງລູກຄ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ຕົວເອງດ້ວຍຕາລາງສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາຂອງພວກເຮົາທີ່ມີລາຄາຖືກທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາສະເຫນີຫຼາກຫຼາຍຂອງສະນຸກເກີເນື້ອທີ່ເຫືອກສະນ້ໍາ. ກະເບື້ອງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫມ່ຂອງພວກເຮົາຍືນຍັນກັບມາດຕະຖານສາກົນ, ໂຄງປະກອບຄ້າຍຄືກັນຄ້າຍຄືກັນທີ່ຫຼຸດລົງຄວາມໄວຂອງຄື້ນ. ມັນມີການອອກແບບສະດວກສະບາຍແລະລ້າສຸດ. ການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕັ້ງງ່າຍຂຶ້ນແລະການກໍານົດຄວາມຍາວທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ; ພວກເຮົາສາມາດກໍາຫນົດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສໍາລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ. ພວກເຮົາສະເຫນີຫຼາກຫຼາຍຂອງສະນຸກເກີເນື້ອທີ່ເຫືອກສະນ້ໍາ. ມີສີຕ່າງໆ, ຂະຫນາດແລະຮູບແບບຕ່າງໆ. ພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ສະຫນອງຊັ້ນນໍາຂອງສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາ. ເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼຂອງນ້ໍາຈາກສະລອຍນ້ໍາ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຜະລິດໂດຍນໍາໃຊ້ຖົງພາດສະຕິກຫຼືເຫຼັກສະແຕນເລດສູງທີ່ມີການອອກແບບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສະອາດຂອງນ້ໍາໃນນ້ໍາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບລະບາຍນ້ໍາຂອງສະລອຍນ້ໍາໄດ້ງ່າຍ. ເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼຂອງນ້ໍາຈາກສະລອຍນ້ໍາ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຜະລິດໂດຍນໍາໃຊ້ຖົງພາດສະຕິກຫຼືເຫຼັກສະແຕນເລດສູງທີ່ມີການອອກແບບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສະອາດຂອງນ້ໍາໃນນ້ໍາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບລະບາຍນ້ໍາຂອງສະລອຍນ້ໍາໄດ້ງ່າຍ. ເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼຂອງນ້ໍາຈາກສະລອຍນ້ໍາ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຜະລິດໂດຍນໍາໃຊ້ຖົງພາດສະຕິກຫຼືເຫຼັກສະແຕນເລດສູງທີ່ມີການອອກແບບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສະອາດຂອງນ້ໍາໃນນ້ໍາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບລະບາຍນ້ໍາຂອງສະລອຍນ້ໍາໄດ້ງ່າຍ.
ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະສະດວກສະບາຍຫລາຍ, ມີສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, UV ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍສານເຄືອບໂພລີເມີ, ມີຂະຫນາດແລະສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການອອກແບບໃຫ້ມັນສໍາເລັດຮູບທີ່ສົມບູນແບບ. ນີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການໄຫຼຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມສູງ, ຄວາມກວ້າງແລະຄວາມຍາວ. ເຫມາະສົມສໍາລັບການໄຫລຂອງສະລອຍນ້ໍາແລະໄລຍະຍາວ.
ທ່ານສາມາດຊອກຫາສະລອຍນ້ໍາໃນສະໂມສອນສ່ວນຕົວ, ສະໂມສອນສຸຂະພາບ, ສູນການອອກກໍາລັງກາຍ, ສູນຊຸມຊົນແລະແນ່ນອນສະນຸກເກີເອກະຊົນໃນສະຖານທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼືການຄ້າ. ມັນເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສາມາດເກັບກ່ຽວສໍາລັບການພັກຜ່ອນຫຼືການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບການແຂ່ງຂັນ. ສະນຸກເກີເນື້ອທີ່ເຫືອກແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມສະບາຍ; ມື້ນີ້ພວກເຂົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພູມສັນຖານທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ດ້ວຍລັກສະນະທີ່ດີງາມຂອງມັນແລະຄວາມເຫມາະສົມທີ່ດີກວ່າເກົ່າກັບ granite ທໍາມະຊາດ, ຕາຂ່າຍສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາເຮັດໃຫ້ການສະຫນອງນ້ໍາທີ່ສົມບູນແບບ. ການກໍ່ສ້າງສະລອຍນ້ໍາແບບດຽວກັນບໍ່ແມ່ນບ່ອນອື່ນໆ, ສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາມີການປ້ອງກັນທີ່ດີເລີດ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບທັງເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ. ຂຸມ elliptical ຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ pebbles ເດັກນ້ອຍແລະຝົນເລັກນ້ອຍຂອງຝົນຊຶມເສົ້າຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍຂອງເດັກນ້ອຍໄວເດັກທີ່ຈັບຕີນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ເນື້ອທີ່ເຫືອກສະນຸກເກີ gratings ມີການດູດຊຶມນ້ໍາຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ gratings ລອຍນ້ໍາຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຮັກສາສີຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາທີ່ຢູ່ໃນການພົວພັນກັບນ້ໍາສະນຸກເກີ, ບໍ່ເຫມືອນກັບ granite ແລະແກວ່ງກ້ອນຫີນທໍາມະຊາດຝາອັດປາກຂຸມ. ສະນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາຂອງພວກເຮົາກໍ່ຖືກອອກແບບແລະຜະລິດດ້ວຍການປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນໃຈ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະທຸລະກິດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ກາກບອນຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງມະນຸດແລະນີ້ໄດ້ກໍານົດວິທີການທີ່ພວກເຮົາດໍາເນີນການທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາເພື່ອປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດແລະການຮັກສາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສໍາລັບລຸ້ນໃນອະນາຄົດ. ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນຖືກຂັບໄລ່ອອກມາຈາກມູນຄ່າຫຼັກຂອງວິໄສທັດແລະພາລະກິດຂອງບໍລິສັດ. ເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍາວແລະຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານການຜະລິດພະລັງງານແລະການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ. ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການນໍາໃຊ້ຢ່າງຫນ້ອຍເນື້ອໃນທີ່ນໍາມາປຸງແຕ່ງໃຫມ່ໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ທໍ່ຂອງພວກເຮົາ, ການປ່ອຍອາຍຄາບອນຈະຖືກຫຼຸດລົງ. ພວກເຮົາເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານໃນການອອກແບບສີຂຽວແລະຍືນຍົງ.
ကို ABS Spa ရေကူးလျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းခြစ်
ဂရိတ်ခဲ့သည် Rating ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါလုပ်ကွက်၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူး။ အဆိုပါကင်ပန်းကန်ရေပိုလွှဲအစွန်းရေကူးကန်ကို ABS, PVC ဖုံးအုပ်ထားပါ။
** သံချေးမထားဘူးရေထဲမှာဥယျာဉ်ကိုစိုနှင့်အတူအသုံးပြုသောခံရဖို့ဒီဇိုင်း, Anti-ဖန်းဂတ်စ်ဓာတုပစ္စည်းရှိပါတယ်။ နှင့်ခရမ်းလွန်အကာအကွယ်ပိုးအိမ် စမ်းတစ်ဝှမ်းတစ်ဦးကဦးထုပ်ရထားလမ်း။ တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့အပေါက်ပိတ်သောကျောက်ထိပ်တန်း cobbled နိုင်ပါသည်။ ကောင်းသောရေနုတ်မြောင်းအဘို့
ရောင်းချသူ-4-အကောင်းဆုံး ရေကန်အရွယ်အစားပတ်လည်ကို ABS လျှံအပေါက်Yüzmeခြစ်ဆန်ခါလျတ်ယိုစီးမှုတစ်ခုကောင်းစွာ-ဝိုင်းဖွဲ့စည်းဖို့ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရေကူးကန်သို့မဟုတ်ရေကန်တဝိုက်ဆန်ခါဆန်ခါလျတ်အစွန်း။2စံ width ကို 25cm နှင့်အတူကို ABS ပလပ်စတစ်ကနေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို 30 စင်တီမီတာ။ ပေါ့ပါးအသုံးပြုရန်နှစ်ခုရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်ရေကူးကန်ထဲကစီးသောရေကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရေကန်ပတ်ပတ်လည်ကိုတက်မီးအတွက်အသုံးပြု noncorrosive ရှိပါတယ်။ ရေ filtration စနစ်များသို့စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့များမှာ
: 1) ထိန်သိမ်း, ကို ABS ပလပ်စတစ်, အထူးခှနျအားဒီဇိုင်းနှင့်များစွာသောအခြေအနေများထိုသို့အသုံးပြုပါ။ ပြားသြဇာလမ်းခင်းဘို့တပတ်ရစ်။ အဆိုပါငါးကြင်းရေကန်ပေါ်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါခင်း။ နှင့်ခရမ်းလွန်အကာအကွယ်ပိုးအိမ် စမ်းတစ်ဝှမ်းတစ်ဦးကဦးထုပ်ရထားလမ်း။ တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့အပေါက်ပိတ်သောကျောက်ထိပ်တန်း cobbled နိုင်ပါသည်။ ကောင်းသောရေနုတ်မြောင်းအဘို့3) 25cm နှင့် 30cm အကြားလွှမ်းမိုးသောခြစ် width ၏အရွယ်အစား, တစ်ဘောင်ရထားလမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စတုဂံရေကူးကန် shaped ကွေး (အခမဲ့ Form ကိုရေကျင်း) အဖြစ်သုံးနိုင်တယ်
4) စံအရောင်များဖြစ်ကြသည်။ အဖြူ (White က Cream အရောင်), အသုံးပြုမှုအတွက်တစ်စက္ကန့်ကိုဆက်သွယ်ထားသောလှံတံနှင့်ဒုတိယတန်း။ ဘတ်ဂျက်၏အကြမ်းခံများနှင့်အပိုထူနှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်း။
လျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Transversal ခြစ်ဖုံးရေကူး ရေကန်ယိုဆန်ခါဆန်ခါ။ ရေကန်တဝိုက်ဆန်ခါလျတ်။
ရေကူးကန်သို့မဟုတ်ရေကန်တဝိုက်ဆန်ခါဆန်ခါလျတ်အစွန်း။ ပလပ်စတစ်ကို ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Transversal ခြစ်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဆန့်ကျင်တည်ငြိမ်သမားရိုးကျပလတ်စတစ်ကနေကွဲပြားခြားနားသည်။ ခွန်အား, ခိုင်မာခြင်း, ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခုခံအတူ။ နှင့်2အပြည့်အဝအရွယ်အစားနှင့်အတူရတဲ့အရာတွေဆင်စွယ်ဒဏ်ချက်, အကျယ် 25cm ။ နှင့် 30 စင်တီမီတာမရှိကြပေ။ ပေါ့ပါးအသုံးပြုရန်နှစ်ခုရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်ရှိပါတယ်, မချေးပါဘူး, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ခဲ့သည်။ နေရောင်ကိုတက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဆိုပါပြဿနာသည် frame ခွဲထားပါတယ် စျေးအသက်သာဆုံး အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော ရေကန်ပတ်ပတ်လည် ရေကူးကန်ထဲကစီးသောရေကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရေကူးကန်ရဲ့အစွန်းမှာတပ်ဆင်မှုအတွက်တစ်ဦးဆင်းလှသောအစ်မ, အကြမ်းခံမှတဆင့်ပြေးနေတဲ့ကားကိုတပင်မျှမသည်အဘယ်မှာရှိ။ အလွယ်တကူရေဝင်ရန်အရဆေိုးသည့်စနစ်သို့ညှစ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဘောင်ရထားလမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စတုဂံရေကူးကန် shaped ကွေး (အခမဲ့ပုံစံမြောင်း) အစားသံမဏိဆန်ခါလည်းသုံးနိုင်တယ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲမြေညီထပ်စင်္ကြံ footpath လယ်ယာတိရိစ္ဆာန်များမှအိမျတျောကိုလှည့်ပတ်ရေနုတ်မြောင်း။
• Chancon Channel ကိုခြစ်အထူးများ၏လုပ် မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆ polyethylene နှင့်ခရမ်းလွန်အလင်းမှခုခံဘို့ကုသ, Chancon Channel ကိုခြစ်ပင်အခက်ခဲဆုံးရာသီဥတုအတွက်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။ ဒါကထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းအတွက်ကိုဆီးတားဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် ယနေ့ရှိနိုင်ပါမည်သည့်ရေကူးကန်ဓာတုပစ္စည်းများသက်ရောက်မှု – ရာသီရာသီအပြီး။ Chancon ရုပ်သံလိုင်းဆန်ခါ 25mm အထူအတွက်ထောက်ပံ့နေသည် အကောင်းဆုံးခွန်အားနှင့်သက်တမ်းအဘို့စံအဖြစ်။
•အထူးမျက်နှာပြင်ပုံစံတစ်ခုဆန့်ကျင်သေချာ ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့လွယ်ကူကျန်ရှိသောနေတုန်း, -slip မျက်နှာပြင်နှင့်နှစ်သက်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်။
•ရိုးရှင်းစွာ clip အရာတစ်ဦးချင်းစီအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ထောက်ပံ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူတပ်ဆင်မှုအတွက်အတူတကွ။ ဒီစနစ်ကိုလည်းရန်ချက်ချင်း access ကိုခွင့်ပြုထား ရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါကစစ်ဆေးခြင်းများအတွက်ရုပ်သံလိုင်း။
•2width (၏ရွေးချယ်မှုအတွက်သာရရှိနိုင် ကမ်းလှမ်းမှုကိုဆန်ခါ 250mm / 300mm) နှင့် (ဖြောင့်သို့မဟုတ်ကွေး profile များကိုများအတွက်)2စတိုင်များ, ချန်နယ်၏ Chancon စံအကွာအဝေး
ဆန်ခါလျတ် – ရေကူးကန် / ရေကူးကန်လျှံခြစ်အရောင်တစ်ဝှမ်းရေနုတ်မြောင်း။ စံအရောင်များကိုမုန့် (မုန့်အရောင်), တစ်စက္ကန့်ကိုဆက်သွယ်ထားသောလှံတံနှင့်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက်ဒုတိယတန်းပါဝင်သည်။ ဘတ်ဂျက်၏အကြမ်းခံများနှင့်အပိုထူနှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်း။
ABS1: အ H ကို = 22.5mm, ထိုအမျိုးအစား: နျ Standard လျှံအပေါက်ဆန်ခါ
(46 ကိုအပိုင်းပိုင်း / မီတာ, ပလပ်စတစ်အထူ 12.5mm အဆိုပါစံဗားရှင်းတစ်ဦးမြို့ပတ်ရထားပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်ဖို့အသုံးပြုတဲ့စုံတွဲ။ ) ။
ABS2: အ H ကို = 22.5mm, ထိုအမျိုးအစား: နျ Standard လျှံအပေါက်ဆန်ခါ
ABS3: အ H ကို = 24.5mm သည်အကြီးစားတစ်ဦး Load: လျှံအပေါက်ဆန်ခါ
(38 ကိုအပိုင်းပိုင်း / မီတာ, ပလပ်စတစ်အထူ 15mm ထူထပ်သောဗားရှင်းတစ်ခု image ကိုစက်ဝိုင်းနဲ့ dual-core ။ ) ။
ABS4: အ H ကို = 24.5mm သည်အကြီးစားတစ်ဦး Load: လျှံအပေါက်ဆန်ခါ
အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ် linear ရေကျင်းများအတွက်ဆန်ခါ , တင်းကျပ် PVC ။ ဒြပ်စင်နှင့်အတူဆန်ခါ၏ဝိသေသလက္ခဏာများမှစင်ပြိုင် ရေကန်၏အစွန်း: ကြောင်းပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့, ခိုင်မာတဲ့အစိုင်အခဲများနှင့်သာယာသောဖြစ်ပါသည်, ထိထိရောက်ရောက်ရေကူးကန်ရဲ့အစွန်းမှာလျတ်ရေစုဆောင်းနှင့်အမြင့်ဆုံးလုံခြုံမှုနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကိုထောက်ပံ့ပေးရာ။ ဆန်ခါကို run Roll-up, ရေကူးကန်ကိုယ်ရေး , ရေကန်အနားပစ္စည်းအရည်အသွေးမြင့်ဖို့ညာဘက်ထောင့်မှာခရမ်းလွန်ကိုစုပ်ယူနှင့်အတူအလွန်ခက်ခဲ-ဝတ်ထားနှင့်အပြည့်အဝပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်းပလပ်စတစ်, running ဆန်ခါအရက်ဆိုင်အတူ။ , လုံးဝချေး-အခမဲ့နှင့်ယဉ်ပါးကလိုရင်း, ပင်လယ်ရေနှင့် spa ရန်။ ရေ, မည်သည့်သတ္တုအဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါဘူး။ အစိတ်အပိုင်းများ; မျက်နှာပြင်အမြင့်ဆုံးပေးအားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်ပူးတွဲ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး။ အဆိုပါဆန်ခါအာမခံချက်မြင့်မားသောအလေးချိန်ဝန်စွမ်းရည် နှင့်စက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
1. ဆန့်ကျင်ခရမ်းလွန်ထို့အပြင်: ကနေပလပ်စတစ်ကာကွယ်ပေးသည် နေရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဝါရောင်;
2. ဆန့်ကျင်စျေးမှာထို့အပြင် သာ. မြတ်သက်ရောက်မှုအာမခံ ခုခံ;
3. ပုပ်-အထောက်အထား: အဖို့ခံနိုင်ရည် အသေးစားသက်ရှိများနှင့်မှိုများအတွက်တာဝန်ရှိဘက်တီးရီးယား;
5. RoHS နှင့်လက်လှမ်းမီစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာ Eco-သဟဇာတဖော်မြူလာနှင့်အတူ;
အစိမ်းရောင် PVC အတွက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ် 6. ။
7. လက်မှတ်အတွက် Anti-စလစ်ဖြစ် 51097 စံချိန်စံညွှန်းများ Din နှင့်အတူလိုက်နာမှု။
ဂရိတ်ခဲ့သည် Rating ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါလုပ်ကွက်တစ်ရေကူးကန်ကို ABS Spa ရေကူးလျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းခြစ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံအပေါ်ညွှန်ကြားချက်များ
ခက်ခဲတဲ့၏ လုပ်. အကြမ်းခံကို ABS အလင်းကိုအလွယ်တကူအက်ဘောင် corrode မထားဘူး။ ရေကန်၏ဂုဏ်အသရေဖို့ filtration သည့်စနစ်သို့ရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။ လည်းသုံးနိုင်တယ်။ ချောမွေ့စွာဂျပန်သံမဏိကိုစိုးရိမ်။ ရေကန်ပတ်လည်မှာရေနုတ်မြောင်း, အခြားတစ်ဦး single-core ရှိပါတယ်။ ထိုအခါရေကူးကန်နှင့်ရေကူးကန်စက်ဝိုင်းများအတွက်စံပြဖက်။ တစ်ဦးကအဖြူနှင့်မုန့်
သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ကျန်းမာရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုများအတွက်ရေကူးကန်ဖန်တီးရန်။ တချို့ရေကူးကန်တစ်ခုဥာဏ်ရှိသည်သငျ့သညျ။ ရေကူးကန်နှင့်ရေကူးကန်ပြည့်စုံရရန်။ အထွေထွေသောကြောင့် အဘယ်သူမျှမနားလည်မှုတစ်လမ်းအတွက်လည်းမရှိပါ။ ပရိယာယ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ဖုံးကွယ်စေခြင်းငှါ စျေးပေါတဲ့အတူဆုံးဖြတ်ချက်များအောင် သူကတစ်ဦး filter ကို, စုပ်စက်, ပစ္စည်းကိရိယာများကြောင်းအဆိုပြုထား။ ရေကူးသို့မဟုတ်မများအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများကဘာတွေလဲ။ ရဲ့ရေကူးကန်, ဘာမှလိုအပ်ပရိဘောဂများမှာ / စက် tools တွေကိုရေကူးရေကူးကန်, ရေပန့်များ, ရေကူး, မျိုးဖြစ်ကြောင်းရေကူးကန်, အမျိုးအစား, စနစ်, ရေကူးကန်, filtration များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
ရေကူးကန်အဖြစ် 1.1 လုပ်ကွက်, ပစ္စည်းကစျေးနှုန်းချိုသာအောင်, ထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုစာရွက်သတ္တုဖိုင်ဘာဖန်အဖြစ်မြို့ရိုး, တပ်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကန့်သတ်အသုံးပြုမှုရှိပါတယ်။ အစားထိုးလိုအပ်ပါတယ်
1.2 အဆိုပါရေကူးကန်စံဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာသုံးပြီးကွန်ကရစ်ရေကူးကန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်အမြဲတမ်းထက်ပိုမိုကုန်ကျပါတယ်။ Long ကတစ်သက်တာ
2. ရေကူးကန်နှင့်ရေကူးကန်အိမ်သူအိမ်သား (ပုဂ္ဂလိကရေကူးကန်, ကလပ်ယေဘုယျ) အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံများကို။ စံယှဉ်ပြိုင်ရေကူးကန်အမျိုးအစား။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများတည်ထောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း
3. ရေကူးကန်နှစ်ခုစနစ်များ, အမည်ရသို့ခွဲခြားခဲ့သည်
Box ကို Skimmer Skimmer အသုံးပြု. 3.1 စနစ်။ လျတ်ရေ, မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖုန်, အများ၏အချက်
3.2 စနစ်ကလျတ် [လျှံစနစ်] ရေကူးကန်လျတ်ပတျဝနျးကငျြပါးစပ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖုန်တက်တာအကြံပေးအဖွဲ့လျှော်ကျောတစ်ဦးမှတစ်ဦး filtration စနစ်ကတဆင့်ဖြန့်ဝေ
4 ။ ရေကူးကန်များတွင်တပ်ဆင်ဘို့လိုအပ်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများရေကန် [ရေကူးရေကူးကန်ပစ္စည်းကိရိယာများ] ။
Maindrain [ရေကန်၏ဆန်ခါအောက်ခြေ] ကြမ်းပြင်သို့မဟုတ်မြို့ရိုးကိုဆေးကြောဖို့ရေ dispensing, ရွှံ့နွံနို့စို့ဘို့ခေါင်းကိုပြွန် [ဖုန်စုပ်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်], လျှံစီး [Skimmer] အပါအဝင်သို့မဟုတ်။ spa လုပ်ပေးဘို့မြောင်းကင် [လျှံခြစ်] လှေကား, ရေကူးကန် [Ladder] ရေအောက်အလင်းအိမ် [100/300 ဝပ်ရေအောက်အလင်း] nozzle အစုံသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများလျှံ
/ 5. မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းများ / ပရိဘောဂများမှာ။ ဆော်ဒါပြာ – – Hydrochloric acid, ရုပ်ထု, စမ်းရေတွင်း, Slider က, လေမွေ့ယာ, စားပွဲ, ကုလားထိုင်တစ်ခုမိုးလုံလေလုံရေကူးကန်တစ်ဦးအသက်ကယ်လှေ player ကို / စီးရီးလေဟာနယ်သန့်ရှင်းရေး grout, ပွတ်တိုက်ဖြီး, ပစ္စည်းများလျှော်ဓါတ်ကူပစ္စည်း, ရေကိုစမ်းသပ်သည်ကလိုရင်းတို့ပါဝင်သည်။
အဆိုပါရေကူးကန်ခြစ်အရောင်များ, အရွယ်အစားနှင့်စတိုင်များ၏အမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အုပ်ကြွပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အများဆုံးရာသီဥတုခုခံပေးနေကြသည်။ ဆန်ခါ၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းလွယ်ကူသော installation နဲ့အရှည်၏ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဆန်ခါဆေးကြောသန့်စင်ထိန်းသိမ်းနည်းရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြပြီးပိုရှည်ဝန်ဆောင်မှုအသက်အဘို့အကာကွယ်ပေးခရမ်းလွန်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားကိုအလွယ်တကူထောင့်ကျော်တင်နိုင်နဲ့ anti-စလစ် finish ကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဌန်ရေကန်လိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအရောင်ရွေးချယ်မှုအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားရေကူးကန်ထဲကရေများလျှံ minimize ။ ဤရွေ့ကားရေကူးကန်၏ရေနုတ်မြောင်းစနစ်အားချိတ်ဆက်ထားသည့်ယိုစီးမှုသို့ရေလွယ်ကူသော seepage ခွင့်ပြုထားတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့တန်းပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်သံမဏိသုံးပြီးလုပ်ကြံနေကြတယ်။ အထူးအင်္ဂါရပ်များ, နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေး Anti-ချောနှင့်အလွန်အဆင်ပြေအတည်ပြုပါ။ ခရမ်းလွန် Co-ပေါ်လီမာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကုသကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအတွက်ရရှိနိုင်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အရောင်ရရှိနိုင်။ အဆိုပါဆေးထိုးပုံသွင်းဒီဇိုင်းကပြီးပြည့်စုံ finish ကိုပေးသည်။ install လုပ်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအကျယ်နှင့်အရှည်, ကွေးခြင်းနှင့်ဖြောင့်နှစ်ဦးစလုံးလွှမ်းမိုးသောအမြင့်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်: အရေကူးကန်များ၏လျတ်စနစ်များများအတွက် client ကိုဓာတုနှင့်အချေးခုခံစံပြ၏လိုအပ်ချက်နှင့် Spa မ်ားနှုန်းအဖြစ်ကျနော်တို့အိန္ဒိယမှာတော့သံမဏိရေကူးကန်ခြစ်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ဤရေကူးကန်ပတ်လည်လျတ်ရုပ်သံလိုင်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်အသုံးပြုကြသည်။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားကျွန်ုပ်တို့၏ရေကူးကန်ခြစ်အတွက်ရေကူးရေကန်ခြစ်အဆိုပါရေကူးကန်ပတ်ပတ်လည် built လွှမ်းမိုးသောချန်နယ် (ယိုစီးမှု) ကိုဖုံးလွှမ်းနှင့်ရေကူးကန်ဝင်ရောက်နေစဉ်ရေကူးလွှမ်းမိုးသောရုပ်သံလိုင်းအတွက်လဲကျမသေချာစေရန်အသုံးပြုကြသည်ကိုဆက်ကပ်။ အဆိုပါရေကန်ခြစ်လွှမ်းမိုးသောရေကန်ရေလျှံစီးယိုစီးဝင်သောသေချာဒါပေမယ့်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ခြေကအထဲမှာမရပေကြောင်းသေချာစေရန်သူတို့ကိုကြား၌လုံလောက်သောကွာဟမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေကူးကန်ခြစ် Injection ကိုပုံသွင်းထားပလတ်စတစ်များဖွင့်ထားကြပါတယ်။ မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်နှင့်လူအတော်များများ၏အလေးချိန်ဆန့်ကျင်ချောဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်အဆင်ပြေထမ်းလုံလောက်အောင်ခိုင်ခံ့။ ခရမ်းလွန်ကုသ Co-ပေါ်လီမာ၏ဖန်ဆင်းကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအတွက်ရရှိနိုင်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အရောင်ရရှိနိုင်။ အဆိုပါဆေးထိုးပုံသွင်းဒီဇိုင်းကပြီးပြည့်စုံ finish ကိုပေးသည်။ လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေး။ လမျးဖွောငျ့နှင့်ကွေးနှစ်ဦးစလုံးရေနုတ်မြောင်းအမြင့်, အကျယ်နှင့်အရှည်ကိုက်ညီ: အကို client ဓာတုနှင့်ရေကူးကန်များနှင့် Spa မ်ား၏လျတ်စနစ်များများအတွက်ချေးခံနိုင်ရည်စံပြများ၏လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေကူးကန်ခြစ် Injection ကိုပုံသွင်းထားပလတ်စတစ်များဖွင့်ထားကြပါတယ်။ မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်နှင့်လူအတော်များများ၏အလေးချိန်ဆန့်ကျင်ချောဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်အဆင်ပြေထမ်းလုံလောက်အောင်ခိုင်ခံ့။ ခရမ်းလွန်ကုသ Co-ပေါ်လီမာ၏ဖန်ဆင်းကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအတွက်ရရှိနိုင်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အရောင်ရရှိနိုင်။ အဆိုပါဆေးထိုးပုံသွင်းဒီဇိုင်းကပြီးပြည့်စုံ finish ကိုပေးသည်။ လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေး။ လမျးဖွောငျ့နှင့်ကွေးနှစ်ဦးစလုံးရေနုတ်မြောင်းအမြင့်, အကျယ်နှင့်အရှည်ကိုက်ညီ: အကို client ဓာတုနှင့်ရေကူးကန်များနှင့် Spa မ်ား၏လျတ်စနစ်များများအတွက်ချေးခံနိုင်ရည်စံပြများ၏လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေကူးကန်ခြစ် Injection ကိုပုံသွင်းထားပလတ်စတစ်များဖွင့်ထားကြပါတယ်။ မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်နှင့်လူအတော်များများ၏အလေးချိန်ဆန့်ကျင်ချောဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်အဆင်ပြေထမ်းလုံလောက်အောင်ခိုင်ခံ့။ ခရမ်းလွန်ကုသ Co-ပေါ်လီမာ၏ဖန်ဆင်းကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအတွက်ရရှိနိုင်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အရောင်ရရှိနိုင်။ အဆိုပါဆေးထိုးပုံသွင်းဒီဇိုင်းကပြီးပြည့်စုံ finish ကိုပေးသည်။ လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေး။ လမျးဖွောငျ့နှင့်ကွေးနှစ်ဦးစလုံးရေနုတ်မြောင်းအမြင့်, အကျယ်နှင့်အရှည်ကိုက်ညီ: အကို client ဓာတုနှင့်ရေကူးကန်များနှင့် Spa မ်ား၏လျတ်စနစ်များများအတွက်ချေးခံနိုင်ရည်စံပြများ၏လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်။ လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေး။ လမျးဖွောငျ့နှင့်ကွေးနှစ်ဦးစလုံးရေနုတ်မြောင်းအမြင့်, အကျယ်နှင့်အရှည်ကိုက်ညီ: အကို client ဓာတုနှင့်ရေကူးကန်များနှင့် Spa မ်ား၏လျတ်စနစ်များများအတွက်ချေးခံနိုင်ရည်စံပြများ၏လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်။ လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေး။ လမျးဖွောငျ့နှင့်ကွေးနှစ်ဦးစလုံးရေနုတ်မြောင်းအမြင့်, အကျယ်နှင့်အရှည်ကိုက်ညီ: အကို client ဓာတုနှင့်ရေကူးကန်များနှင့် Spa မ်ား၏လျတ်စနစ်များများအတွက်ချေးခံနိုင်ရည်စံပြများ၏လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်။
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါစက်ရုံ မြင့်မားသောနေသောလူသွားလမ်း Flooring အဆိုပါ PP ပလပ်စတစ်ဇယားကွက်
လျှောက်လွှာဇယားကွက်ပလပ်စတစ်စာရွက်အခင်း, ဖို့အတွက် walkway စက်မှုဓာတုပစ္စည်းနေရောင်။ မပေးသံချေး, အလင်းအလေးချိန်, အဆင်ပြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမပိုကောင်းသံမဏိပြုလုပ်ခြင်း။
propylene ၏ copolymer ဒီလိုပါပဲကြည့်ရှုပါ။ polyethylene ထက်ဒီလိုပါပဲ။ အရှင် 0,905 ဖို့အကွာအဝေး 0,890 အတွက်တစ်ဦးကသိပ်သည်းဆ, ထိုကဲ့သို့သော polyethylene ဆင်တူ polyethylene သည်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများအဖြစ် float နိုင်ပါတယ်။ ဘုံ features တွေ
– တစ်ခက်မျက်နှာပြင်ခြစ်ဆန်သော, ပုံပျက်သောအဆက်မပြတ်မဟုတ်ပါဘူး
– ဒါဟာပတ္တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အလွန်အကြမ်းခံ
ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့လမ်းခင်းပြား စျေးနှုန်းချိုသာသံမဏိနှင့်ဖန်ထည်ဖိုင်ဘာ (FRP) စက်မှုအခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့။ သွန်းလောင်းတပ်ဆင်အတွက်အချိန်ချွေတာခြင်း, မွေးမြူရေးခြံပေါ်ထွန်းညှိအနံ့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မထားဘူး။ installation နဲ့ setup ကိုအခြားသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ်
ဆန်ခါအဆိုပါဆန့်ကျင် Transgrate PP လျတ်ခြေနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကြာရှည်ခံမှုမှအများဆုံးနှစ်သိမ့်ထောက်ပံ့သောငါတို့ရေကူးကန်ဆန်ခါဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လျတ်ဆန်ခါသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ပုံသွင်းနေသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေကူးကန်စူပါခိုင်မာတဲ့နှင့်တာရှည်ခံဆန်ခါကို thermoplastic ပစ္စည်းပြုပြင်မွမ်းမံ။ သူတို့ကကွဲပြားခြားနားတဲ့ရေကူးကန်သတ်မှတ်ချက်များအမျိုးမျိုးတွေ့ဆုံရန်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။ ဓာတုထုတ်ကုန်ကိုခံနိုင်ရည်မြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကို PVC, စုပ်မှုတ်, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်အလှဆင်ကာကှယျ; ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ခံနိုင်ရည်ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးအိမ်တွင်းနှင့်အိမ်ပြင်သုံးနိုင်တယ်; အထူးပြု်ထမ်းများအတွက်မလိုအပ်နှင့်အတူမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရိုးရိုးတပ်ဆင်ခြင်း, အဘယ်သူမျှမကော်ရန်လိုအပ်ပါသည်ကတည်းကဖယ်ရှားပစ်ရန်လွယ်ကူသော; စခန်းချနေရာများ, အမြည်း, ဗင်အဆင့်ဆင့်, ကုန်သွယ်ရေးပြပွဲတစ်ခွင်, Mini-ကလပ်, ကလေးထိန်းဌာနများ, ပျိုးခင်းကျောင်း, ရေကူးကန်များ, gyms များအတွက်သင့်လျော်သော ,.
ပရိုဖိုင်းကိုရေကူးကန်ခြစ်အမျိုးအစားလျှံစီးရုပ်သံလိုင်း Self-ထောက်ပံ့ကျော်တံတားနိုင်မှဆောက်လုပ်ထားကြသည်။ ထို့ကွောငျ့မအပိုဆောင်းထောက်ခံမှုလိုအပ်ပါသည်။ obtuse ထောင့်ထောင့်, ညာထောင့်, ဒါမှမဟုတ်ဒြပ်သို့မဟုတ်သံမဏိ enclosing ဒြပ်စင်နှင့်အတူ miter ထောင့် 90 အခြားအစွန်းဖြေရှင်းချက်: အဆိုပါပရိုဖိုင်းကို width ကိုမရရှိနိုင်သည့်အကွာအဝေး, စံအစွန်းဗားရှင်းအတွင်းစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။ ရေကူးကန်ခြစ်အချိန်ကျော်မဆိုအဆိပ်သို့မဟုတ် noxious အငွေ့အငွေ့ပျံရာကိုမဆိုအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများဆံ့မ ASM-ကိုယ်ရေးဖိုင် FSR များအတွက်အသုံးပြုသောကုန်ကြမ်း။ အဆိုပါ profile များကို Formaldehyde, ကျောက်ဂွမ်း, HCH, PCB, PCP နှင့် CFC ကနေအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်သူတို့က, သယံဇာတကနေအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းဦးဆောင်လမ်းပြနှင့်မည်သည့် monomers, biocides သို့မဟုတ် plasticisers ဆံ့မခံကြဘူး။ အခြေခံပစ္စည်းအစားအစာ-အဆက်အသွယ်ဘို့ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ ASM-ကိုယ်ရေးဖိုင်ရေကူးကန်ခြစ်အက်ဆစ်ရန်ရည်ညွှန်းနှင့်အတူ Din 51097 အတည်ပြုအုပ်စုတစ်စု B ကိုမှအညီစမ်းသပ်လက်မှတ်နှင့်အတူစလစ်လုံခြုံရေးအတွက်စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။ အဆိုပါ 22.10.2014 ရက်နေ့တွင်က “Fliesenleger-Vereinigung EV” ကစမ်းသပ်ပြီးဒီတစ်ခုတည်း profile များကိုအကြားအကွာအဝေးကိုအာမခံ။ အဆိုပါရှည်လျားသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်တစ်သက်တာနှင့် FSR ရေကူးကန်ခြစ်များ၏အလွန်အမင်းကျန်းမာရေး features တွေအတွက်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်စိမ်ကနေအခမဲ့, ပွတ်မျက်နှာပြင်ရေးအတွက်လုံလောက်နေကြသည်။
ရေကူးကန်များနှင့်ပိုက် applications များအဘို့, ကို Safe ကျန်းမာရေး & အကြမ်းခံခြစ်အမြင့်ဆုံးလုံခြုံမှုနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးစံချိန်စံညွှန်းများအဘို့အရပ်ရေကူးကန်ခြစ်ရေကူး။ အဆိုပါရေကူးကန်ခြစ်ခြေပေါ်လွယ်ကူသောဖြစ်ကြပြီးပြည့်စုံနှစ်သိမ့်ကိုဆက်ကပ်။ လျတ်ခြစ်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကနှစ်ဦးစလုံးရေကူးကန်များအတွက်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အလွန်ထိရောက်စွာအားလုံးဖွစျပှားလျတ်ရေကိုစုဆောင်းပါ။ သူတို့က perpendicular ကို run ပါသို့မဟုတ်ရေကူးကန်ရဲ့အစွန်းမှစင်ပြိုင်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်-form ကိုရေကူးကန်, whirlpool သို့မဟုတ်စတုဂံရေကူးကန်မဆိုပုံသဏ္ဍာန်ဖို့အဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါသည်နိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဗားရှင်းကိုသင်ရေကူးကန်ခြစ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, သန့်ရှင်းရေးနှင့်သက်တမ်းအဘို့အရပ်ရေကူး, ကိုရွေးချယ်ပါ။ အားလုံးဆန်ခါအမျိုးအစားများကိုလုံခြုံရေးပရိုဖိုင်းကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် Non-စလစ်လက်မှတ်ရှိသည်, လုံးဝကျန်းမာရေး finish ကိုအာမခံပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအများကြီးမှယခုသင့်ရဲ့ရေကူးကန်ဆန်ခါကိုရွေးချယ်ပါ။
#Grating Manhole အဆိုပါမျက်နှာဖုံးတစ်ခုကကျွမ်းကျင်သူအထူးကုရဲ့
GFRP Composite သံမဏိရဲ့ Gully Scupper ၏, ခြံဝင်းသို့ဝင်ခြစ်ကင်ဖြစ်ပါတယ် , Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း ,, သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဒီမြောင်း, အဆငျသငျ့ပစ်ချ Grid အပေါ်သံ Manhole များအတွက်ကျဇယား Catch တစ်ဝှမ်းမျက်နှာဖုံးများ, ကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြ, ပလက်ဖောင်းပေါ်အသုံးပြုအဆိုပါ Access ကိုမြှင့်, ဘားဟာသစျပွုပွငျကုန်းနှီးစားပွဲတင် Clip Fastener အပေါ် key ကို Clamp ပြုပြင်မွမ်းမံစွဲစေသော့ခတ်သည့် Anchor mounting ပန်းကန် lock ခြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ panel ကိုကင်, လှံတံ ThreadBar WaterStopper ကျောက်ချစခန်း WingNut ချည်ထားသော Formworks , ဦးထုပ်ကျဇယားတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်သံ, ပိုက်ထုပ်အမျှင်ဓာတ်ပေါင်းစပ်စေး, အအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့ Holger Hansen ဦးပိုင်, ဦးထုပ်အဖုံးပိုက်ရေကန် filter ကိုမိလ္လာကန်ကိုချွတ်အဖုံး, ဦးထုပ်ကိုသွန်းလေ၏။ ပြား Raceway လမ်းခင်း, ရေနုတ်မြောင်းဖြုန်း။ ပတ်ပတ်လည်ဦးထုပ် – စတုဂံ, ဘိလပ်မြေ, သံမဏိကွန်ကရစ်အားဖြည့်, ရေဆိုးစုဆောင်းခြင်းကုသမှုအတွက်အဖုံး, အဖုံးကိုချက်ချင်းဖြတ်ဖို့ left; ဆန်ခါ, ဂရိတ်အရသာ, သံမဏိကင်အဖုံးချက်ချင်း access ကို, ဘောင်ကင်သစ်ပင်အဖုံး, အနား, နှာခေါင်း, မျက်ခုံး-စလစ်လှေကားထစ်အဖုံး panel ကို၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။
tool ကိုသိုလှောင်မှုစင်ပေါ် # သံမဏိ Pegboard ချိတ်, မြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှု tools တွေကိုဆွဲထားသိုလှောင် Tools များ DIY Kit Winnipeg ပျဉ်ဘုတ်အဖွဲ့ယူပြီးဖောက်ထား Pegboard Hook စင်ပေါ်။ယင်း၏စာရင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ # Pegboard အပေါ်ဆွဲထားချိတ်ချိတ်ဝါယာကြိုးခြေထောက်။ ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်များ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, သစ်သား။ တွင်းဖွဲ့စည်းစက်မှုဇုန်, # သစ်သားပျဉ်ပြားသံမဏိစာရွက်မြို့ရိုးကိုအလှဆင်စက်ရုံ-စတိုင်မီးဖိုချောင်ထဲမှာအပေါက်။ ဆွဲထားကရိယာအမှတ်တရ Tools များ Holder သိုလှောင်ဆင်ခက်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်ရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်သည့်လမ်းဘေးတစ်လျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဘက်အရွက်, တုတ်ကျင်းအင်တုံအသွားအလာလမ်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီး, ဘက်တစ်လျှောက်တွင်အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံ scupper ရေနုတ်မြောင်းအသွားအလာခြစ်ဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်းအခြမ်းရေနုတ်မြောင်း scupper ။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ဝင်ပေါက်ဆန်ခါနှင့်အတူ, မုန်တိုင်းထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းနှင့်လမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောဆန်ခါဖြီးအပျက်အစီးများခွဲထုတ် box ကိုထောင်ချောက် weir စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း box ကိုကင်, ကွန်ကရစ်ရေအားဖြည့်။ အပြည့်အဝတဝက်, tapered ခေါင်းကိုဝိုင်းပါတယ်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း။ မြှို့နယ်များအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA ကျွမ်းကျင်သူများကပလပ်စတစ်လျတ်ရေကန်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။ သံမဏိမြောင်းအစားထိုး, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, ဖန်အတားအဆီးမျက်နှာဖုံးစျေးဆိုင်, အဆောက်အဦးများ, မြို့ရိုး, အပြင်ပန်းဝတ်, အခင်းစာရွက်များကျေးရွာအုပ်စုတင်သောဖောင်ဒေးရှင်းမှ။ ခြေလျင်ခင်း, အပေါ်ကိုခါးပတ်ကနေသဟဇာတထုတ်ကုန်လမ်းခင်းများနှင့်ဒေသခံပန်းခြံများမြှင့်တင်ရန်။ ခရိုင်ကျန်းမာရေးလျှပ်စစ်လယ်စင်မြင့်ရှိုးများ, ပြိုင်ပွဲ, Block ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းမြက်။ ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ block မြက် ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ block မြက် ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။
လူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ, အက်ဖ် RP, ခံနိုင်ရည်ချေး, သံချေး, အပူ, အလင်း, အက်ဆစ်, အယ်ကာလီ, ဓာတုပစ္စည်း, စွမ်းအင်ချွေတာရေးမရှိဖော non-အဆိပ်မဟုတ်သောမီးနှောင့်နှေး, ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ဖန်ဖိုင်ဘာအထူးပြု, Pantip ဖြစ်ပါတယ်။ အခင်း, ပစ္စည်းများ, မျက်နှာပြင် Coates, epoxy, အီးလွယ်ကူ Pot, လြယ္ကူ Pot, ကြမ်းပြင် epoxy က c E ကိုပြုပြင်သံမဏိ, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, mch dos knack, SCG hOmepro Depot Watsadu, Siam ။ polyurethane, PVC ကော်, ဇီဝဇီဝ, PE မှ PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ခက်ကျောက်စက်မှုကြမ်းပြင်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ မီးဖိုချောင်ဟိုတယ်များ, coated ရေတွင်းများ, ဓာတုယဉ်, acrylic ဆေးသုတ်, ပြုပြင်ခြင်း, ပိတျထားသော crack, အပေါ်ယံပိုင်း, ရေစိုခံတာ, ကုန်းပတ်, ရေကူးကန်ဓာတုပစ္စည်းမြောင်းဖိုင်ဘာဖန်, သတ္တုအမိုးမိုးစာရွက်များ, ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပစ္စည်းသံမဏိ။ အတု, ဒြပ်, အော်ဂဲနစ်, ပြန်လည်အသုံးပြု, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, စင်မြင့်စက်တွေ, pallet ဗူးခွံပတ်လည်ရှိရေကူးကန်, ပြားချပ်ချပ် slats, ကြမ်းပြင်ဖျာ, ရော်ဘာခင်း၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်။ စင်ပေါ်, စာရေးတံပေါ်ကြမ်းပြင်အိမ်သူအိမ်သား။ worm ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအလှဆင်မြက်ခင်းလမ်းခင်း။ ပျဉ်ပြား, အပေါက်တွေ, ရေ, သံမဏိဝါယာကြိုး, jig အပေါက်, ဆန့်သံမဏိ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, texture trotters, ကြက်သား, မိုးရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ခေါက်, ဖြတ်အတူလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်စင်္လှံတံရွှေ့ပြောင်းခံရဦးရေနုတ်မြောင်းမြောင်း, matrix ကိုပျက်ကွက်, ကျရှုံးခြင်း, ဝါယာကြိုးကွက်။ Feng Shui, DIY installation ကိုပြုပြင်မွမ်းမံလှေကားစလစ်, သံလမ်း, အနံ့ကြောင့် mini ကိုအသားတင်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခင်း, အပြင်ပန်းအလှဆင် Koi ကန်, Landscaping, ကြွေပြား, အခင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအဆင့်မြှင့်။ ပိုင်ဆိုင်အသစ်တစ်ခု drive ကိုဝယ်ကြလော့။ မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဆိုင်းငံ့အဆိုပါအများကြီးလေဝင်လေထွက်ကင်, အမှတ်တရ Panel များနေကာ Splashboard / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေ Sun က Screen ကို Partition ခွဲ, Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်ခဲ့: ရုံးခန်းသောနေရာများ ,. အခန်းတစ်ခန်း, စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာရေချိုးခန်းကအခန်း, ဆေးရုံ, re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်တွေ့ဆုံ ,. ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးအပြားခေါက်, အပြင်ပန်းလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်ခွဲခြား slat, ထိန်သိမ်း, တစ်မြို့ရိုးပေါ်မှာမျက်နှာကျက်ကို T-bar ကို, မျက်နှာကျက် tile ကိုဒီလိုပါပဲအလင်း gauzy ကုလားကာမြို့ရိုးတပ်ဆင်ထားသည်။ utility အလှဆင် awnings, မျက်စိကန်းသောအာရဇ် pergola Fiat slat, အကာအကွယ်ကွက်အဖုံးငှက်, မြွေ, ငှက်, ရှဉ့်နှင်ထုတ်ခြင်းနှောက်ခြောက်ခေါင်း, partition ကိုပြားစညျးဝေးပှဲလေပြေအရင်း။ မွေ့လျော်, polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လသာဆောင်လှေကားပန်းကန်ဟာဖယောင်းစက္ကူအရွယ်အစား။ အလှဆင်ပြားချွတ်လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကို။ ထိုက်တန်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။ Polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လသာဆောင်လှေကားပန်းကန်ဟာဖယောင်းစက္ကူအရွယ်အစား။ အလှဆင်ပြားချွတ်လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကို။ ထိုက်တန်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။ Polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လသာဆောင်လှေကားပန်းကန်ဟာဖယောင်းစက္ကူအရွယ်အစား။ အလှဆင်ပြားချွတ်လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကို။ ထိုက်တန်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။
GFRP Composite စိန်ထိပ်တန်း Manhole www.chancon.co.th (အထူကင်အဖုံးဖို့မြေဖုံးပိုက် Fiber Glass ကို Mat ​​ပိတ်သိမ်း) Checker ပြားမျက်နှာပြင်မျက်နှာဖုံးများ။ လေထုပြန်နှင့်အပေါက်တွေများအတွက်အဖြူရောင် Polystyrene ဥသေတ္တာ။ ခြစ်အလင်းကိုသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ ထောင့်ကွက်ငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium အလှဆင်, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, ကွာဟမှုအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium ။ LED မီးခွက်သည် / ချောင်းစိန့် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား ထောင့်ကွက်ငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium အလှဆင်, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, ကွာဟမှုအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium ။ LED မီးခွက်သည် / ချောင်းစိန့် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား ထောင့်ကွက်ငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium အလှဆင်, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, ကွာဟမှုအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium ။ LED မီးခွက်သည် / ချောင်းစိန့် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ အဆိုပါ LED မီးခွက်သည် / အလင်းပြန်မှုစိန့်ကနေအလင်းပိတ်ဆို့ဖို့နေရာခြားတစ်ဦး panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။ အဆိုပါ LED မီးခွက်သည် / အလင်းပြန်မှုစိန့်ကနေအလင်းပိတ်ဆို့ဖို့နေရာခြားတစ်ဦး panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivarium အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။
FRP ထုတ်ကုန်များ, GFRPS, Glass ကို Fiber စစ်ကူသံဘောင်များကို Polymer အမျိုးအစား, စစ်ကူဖန်မျှင်ထည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, Composite အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဗီနိုင်း Ester စေး, အလှဆင်အတွက် Root စည် bollards ပင်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုပန်းပု, Landscaping ပြင်ပဥယျာဉ်ကြီးသစ်ပင်ခြစ်, သစ်ပင် Ring ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံး။ လူကူး, လမ်းမလမ်း, ပုံသွင်း, pultrusion, welded bearing bar ကိုဝင်းခြစ်ဖုံးအုပ်, ကေ့လှေကား profile များကို pultuded, လှေကားအုံရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာနှစ်ချက်ကားဂိုဒေါင်အခင်းအဘို့, စံပြမဟုတ်သောဆန့်ကျင်စလစ်နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်လှေကား, ကျယ်ပြန့်ခြေလှမ်း, နင်းအဖုံးများ, Handrail, အခြေခံအဆောက်အဦးပုံသွင်း nosing နင်းတော်မူမည်။ , တုတ်ကျင်းအဖုံးများ, မြောင်း, အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတ္တုခြစ်, အကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို, ဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယံကင် Expanded, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံ, ကာဗွန် serrated ဘားသံမဏိ, ဝတ်, မီဒီယာထောက်ခံမှု, လေကွက်, လက်ရန်း, multi ဇယားကွက်, ဖုံးအုပ်ခြင်း, ခွက်မျိုးတွင်။ , gritted,minimesh, သစ်ရွက် polyester စေး, Palette Partition ခွဲတံခါးပေါက်ကို Windows, စစ်ဆင်ရေးပလက်ဖောင်း, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်အထောက်အထားကြမ်းပြင်, နယူးစိတ်ကူးဆန်းသစ်တီထွင်ဒီဇိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း, Components, ဗိသုကာနှင့်စက်မှုကုန်းပတ်, လမ်းသွားလမ်းလာ Bridges စနစ်, တန်တိုင်း dock ကိုတံခါးခုံ, ခြံစည်းရိုး, ပတ်ပတ်လည်ပြွန်, ပိုက်စာရွက်များ, ထောင့်, ဝါယာကြိုး။ , သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ sump, အပေါ်ယံပိုင်း, Polyurethane ကွန်ကရစ်, ပိုလန်, Epoxy မိမိကိုယ်ကို level, ကြမ်းပြင်နံရံ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, ကြမ်းပြင်ခိုင်မာစေ, grouting ရေစိုခံ, ရေဆိုးကုသမှုစိုစွတ်အအေးခံမျှော်စင်, ကော်လံ, လမိုင်း, သတ္တု, လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, သိမ်းတန်း, စပယ်ယာ, လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေး mesh ။ , polycarbonate, ပလပ်စတစ်, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC မှာ, ထူးခြားဆန်းပြားပေ, Flat စာရွက်များ, စ, ဆန့်ကျင်ခရမ်းလွန်တည်ငြိမ်, အလှဆင်အစိုင်အခဲစာရွက်များ, မြောင်း, မြောင်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထည်အားဖြင့်မိန့်ထား, Hot Tinplates Electro Forge ရဲ့အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးနှစ်ပြီးသော ,. ကြေးဝါကိုသွပ်, ထောက်ပံ့ရေး, စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်, m2 နှုန်းအလေးချိန် ,.အကွာအတိုင်းအတာ, တရုတ်, GMP လုပ်ဝန်စားပွဲပေါ်မှာဖြတ်တောက်ခြင်း, ကားရောင်းဝယ်ရေး, စက်မှု, ပေးသွင်း, Foundry, HACCP, ISO ကို 1400, 900, FDA က Approved, အရောင်းအဘို့အသတ်မှတ်ချက်စျေးနှုန်းကက်တလောက် Infosoft ။
CHANCON ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း / ထုတ်ကုန် Shannon လေဆိပ်
Shannon လေဆိပ်အထူးပြုထုတ်လုပ်သူ။ ရေနုတ်မြောင်းစနစ်များကင်အဖုံး အဆိုပါဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်အတူကြမ်းပြင် Mat စင်္ကြံစောက် footpath ။ လှေကားထိန်သိမ်း ပေါ့ပါး elevated ပြား, သန့်ရှင်းစေဖို့အတွက်ရေကန်အဖုံးဖုံး ပယ်လက်စသတ်ပိုက်မျက်နှာဖုံး manholes ထောင်ဝင်းထဲမှာ utility ထုတ်လုပ်မှုပြား အဆိုပါကဏန်း pad ပါစက်တွေ သံချေးများနှင့်ချေးကာကွယ်မှုဓာတုပစ္စည်းများမှမိလ္လာစနစ်ကအထက်စာရွက်နေသောလူသွားလမ်း။ အဆိုပါကင်နှင့်ဘိုအဖုံးဖုံးအဆိုပါဖုံး Manhole တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူအထူးကုရဲ့ခြစ်ပြီးဆုံး
1. polypropylene (ထို PP) ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားခြစ်ပလပ်စတစ်ကင်ကိုလက်စသတ်။ PP ပလပ်စတစ်ဆန်ခါ စင်္, ရေနုတ်မြောင်း, အလင်းအလေးချိန်, သံမဏိထက်စျေးနှုန်းချိုသာအစွမ်းသတ္တိကိုလူကူး။ စက်ရုံတစ်ဝှမ်းရေ, အရိပ်နှင့် Landscaping ကျောက်များနှင့်ထိတွေ့စိုစွတ်သောဒေသများရှိအသုံးပြုမှု, ကျောက်စရစ်မြေတွင်းငါးကြင်းကွန်ဒိုမီနီယံအိမ်ရာအဘို့သင့်တော်
2. ကို ABS ရေကူးရေကန် spa လျတ် Draianage ခြစ် ပုံသွင်းထား သည့်လျတ်ရေကူးကန်ပတျဝနျးကငျြဆန်ခါ။ ကို ABS ပလပ်စတစ်ကင်2စံ width ကို 25cm နှင့်အတူပြီးဆုံး။ ပြီးတော့ 30 စင်တီမီတာ။ သုံးစွဲဖို့နှစ်ခုရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်ရှိပါတယ်ပေါ့ပါး non-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအင်အား ‘passes ။ စျေးအသက်သာဆုံး အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော ရေကန်ပတ်ပတ်လည် ကားတစ်စီး Chase အဆိုပါ pair တစုံတစျဆငျ့မရှိတစ်ဘဲဥပုံ-shaped ကွေးနဲ့အတူသုံးနိုငျဘယ်မှာခဲ့သည်
3. Hotdip (HDG ။ ) သံအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး သတ္တုသံမဏိခြစ် သွပ်ရည်စိမ်ရဲ့ချော plating welding ခြစ်သံမဏိ။ ဆန်ခါသံမဏိအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပူသို့ကျဆင်းလာသံမဏိပြားပူ Dip ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ interface ကို CO2 စက်ရုပ်တွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်သံမဏိလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ထက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရည်ပျော်ပြီးတော့ပိုမိုမြင့်မားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိပစ္စည်း HDG အားသာချက်ချထားတဲ့စေသည်။ အဆိုပါအားနည်းချက် rusting ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါခိုးယူအရွယ်အစား 25x100cm ။ ပြီးတော့ 30x100cm ။
4. FRP, ဖိုင်ဘာဖန်-အားဖြည့်ပေါင်းစပ်စေးဆန်ခါဖန်မျှင်ထည်ကင် / မှိုခြစ်။ “ခြစ် FRP” အစားထိုးကင်, သံမဏိ / လူမီနီယံ။ ပေါ့ပါးဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်စေးကနေဖန်ဆင်းတော်မြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုရှိပါတယ်, ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်, သံချေးခံနိုင်ရည်, ခရမ်းလွန်နေရောင်ခြည်အပူသို့မဟုတ်ချေးပါဘူး။ သူခိုးမလိုချင်ကြဘူး လြယ္ကူကို Maintenance 50-100 နှစ်ပေါင်း၏အသုံးဝင်သောဘဝ, ရှေးခယျြမှု၏ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်အဖြစ်ကြမ်းပြင်မှအရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ စံစာရွက်အရွယ်အစား 1.5x4M ။ သင့်တော်မြင့်မားသောပြား။ ဒါမှမဟုတ် 3-5 နှစ်ကအာမခံအတွက်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီမည်သည့်အရွယ်အစားမှာအမိန့်ချမှတ်နိုင်ပါတယ်
5. တားဆီးရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်ဟာထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းအနားမှာလမ်းဘေးအပေါ်အမှိုက်သရိုက်အရွက် (Drive ကိုအမြင့် Way ကိုခြစ် drain) ကျဇယားသွန်းသံကိုဖန်ဆင်းသည်။ အဖြစ်အစေခံရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ Split ကိုဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများထောင်ချောက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတလျှောက်လမ်းဘေး၏ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ မြူနီစီပယ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းနှင့်ဘန်ကောက်။
6. Cast ကိုသံအတှကျအဆငျသငျ့ကျဇယားသံပစ်ကျဇယားပိုက် Manhole အဆိုပါဖုံးကိုဖုံးလွှမ်း။ ကျဇယား၏ဖန်ဆင်းထိုင်းနိုင်ငံအတွက် certified ရရှိထားပြီးအဖွဲ့အစည်းများထံမှစံ EN124 စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရသိရသည်ထုတ်လုပ် (ကျဇယားသံ Cast သုံးရန်) သံကိုသွန်းလေ၏။ 2-40 တန်ချိန်နှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်းပတ္ရှိသည်နှင့်ခိုးမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့သော့ခတ်တော်တော်များများရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်အနေဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။ installation ပြီးလွယ်ကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစျေးနှုန်း 1 set ကို frame ကိုအတူဦးထုပ်များပါဝင်သည်
ဖိုက်ဘာမှန်ဘောင်နှင့်အတူအားဖြည့်7FRP Manhole Cover အဖုံး manholes ။ ဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပလပ်စတစ် FRP စံ EN124 သွန်းသံ, ကျဇယားအစှမျးသတ်တိနဲ့တူသံချေးမရအားဖြည့်။ လှလှပပသဘောသဘာဝနှင့်အတူ 2-40 တန်ချိန်ကနေရွေးချယ်ပါ။ ယခင်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိခိုးယူဝယ်ဖို့ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များသည်မဟုတ်
8. ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါး ဆန်ခါအလငျးဒိုင်းကာ filter များလေတိုက် panel ကိုလေဝင်လေထွက် slat လိုက်ကာအဆောက်အဦးများ mask ်လင်းခွဲခြား။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated
9. PegBoard ပြရန် Tools များစင်ပေါ်မြို့ရိုးအပျဉ်ပြား Peggy ဘုတ်အဖွဲ့ Hooks ။ တန်တိုင်းရိုး၌အပေါက်စုဆောင်းခြင်း tools တွေဆွဲထားကြ၏။ Pegboard ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ # ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်များ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, သစ်သား။ မြို့ရိုးကိုအလှဆင်စက်ရုံ-စတိုင်မီးဖိုချောင်, သံမဏိစင်ပေါ် Pegboard Display ကိုချိတ်စင်ကြိုးကွင်း Store မှာ Tools များ Organizing တပ်ဆင်ထားစက်မှုဇုန်, # အတွက်အပေါက် , # တွင်းဖွဲ့စည်းသစ်သားပျဉ်ပြားသံမဏိစာရွက်။ ဆွဲထားပစ္စည်းများကိုအဘို့, Tools များ Holder ဖို့ခက်ရှာဖွေရေးဘုတ်အဖွဲ့သိမ်းတန်းသည်မြို့ရိုးကိုအသုံးပြုဖို့
10 FRP, လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆိုပါဖုံးအဆင့်ဥပမာကာကွယ်ပေးသူဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုစလစ်လှေကားဖိုင်ဘာဖန်။ ကြမ်းပြင် Mat ဖိုင်ဘာဖန်လှေကားထစ်နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကချော်။ အစားထိုးဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ပလပ်စတစ်ဖျာပလပ်စတစ်စာရွက် Anti-စလစ်ရော်ဘာခင်းလုပ်ကွက်, ရော်ဘာဘန်ပါ, ရေချိုးခန်းအတွင်းကျရောက်ကြောင်းရော်ဘာ Non-စလစ်ရော်ဘာဖုန်မှုန့်, မီးဖိုချောင် non-စလစ်ရော်ဘာရေနုတ်မြောင်းပေါက်တွေရှိပါတယ်။ ပြင်ပနှင့် Indoor နှစ်ဦးစလုံးရော်ဘာကြမ်းခင်းကြံ့ခိုင်ရေးကစားကွင်း, ပန်းခြံများ, စာသင်ကျောင်းများ, gyms,
11. HDG / သံမဏိခြစ် Anchor ဖုန်းများအတွက် Clip Clamp Lock ကိုစွဲစေ Fastener ပီပြင်ကုန်းနှီးပူးတွဲ ကလစ်ချုပ်ကိုင်ဆန်ခါပန်းကန်သံမဏိ, သံမဏိ / သော့ခတ် device ကို။ သံချေးဖို့ခံနိုင်ရည်ဇင့်ချထားတဲ့သံမဏိအဆိုပါဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုအများစုဟာသံမဏိဆန်ခါတစ်ဖိုင်ဘာဖန်သို့မဟုတ်သံမဏိစာရွက်ပူးတွဲအသုံးပြုသည်သော့ခတ်။ ပုဂ္ဂလိကသော့ခတ်အောက်ကအလွှာတစ်ခုသံမဏိကွက်ပူးတွဲများအတွက်သွပ်ချထားတဲ့သံမဏိဒီဇိုင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သင်ကဒေါင်လိုက်ကိုင်ပေါ်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆင်တူသုံးပါ။ ဖောက်သည်ဆန်ခါ၏တွင်း (Size ကို mesh) နှင့်တစ်ပန်းကန်ထိန်သိမ်းတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောအာကာသရန်ချန်နယ်တစ်ခုစီကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်
12. Tree စောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံးဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။ တည်ဆောက်လက်စသတ်နှစ်ခုလုံးကိုအတူ။ FRP သံမဏိသံပလတ်စတစ်နဲ့ Big Tree Ring ကို / စောင့်တပ် / ခြစ်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးခြစ်ဖုံး Frame ကပံ့ပိုးမှု ဘောင်ကင်အဆင်သင့်သစ်ပင်၏ခြေရင်းကာကွယ်ပေးသည်။ အလှဆင်ဘို့တပတ်ရစ် အလွယ်တကူအမြစ်ယူမြေဆီရေလောင်း။ ဒါဟာအစကိုထိပုတ်ပါအမြစ်မှတဆင့်ကားတစ်စီး Chase ကာကွယ်ပေးသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးမြေဥယျာဉ် Scape ရှုခင်းဗိသုကာဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ခွန်အား ဒါမှမဟုတ်အစားထိုးကင်ယာဉ်ရပ်နားစာရေးပိုးကောင်များကြမ်းပြင်မြက်ခင်းလမ်းခင်းပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့အဖြစ်ပြီးဆုံး
13. FRP ဖိုက်ဘာမှန်စိန် Checker ပြား Manhole Cover ခြစ် FZ အဆိုပါရေဆိုးအတွင်းကောင်းစွာပိုက်ပယ်ကိုဖုံးလွှမ်း။ Glass ကို Fiber Mat ပြီးလေ၏။ FRP Manhole Cover ခြစ် (စိတ်တိုင်းကျဖို့လုပ် ကိုမဆိုအရွယ်အစားအဘို့မှာ) နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအဖုံး manholes, ရေနုတ်မြောင်း, ဖိုင်ဘာဖန်။ 2-3 ရက်အတွင်းပေးပို့ခြင်းချက်ချင်းပေါ့ပါးအရွယ်အစား (အပ်ချုပ်ဆိုင်စေ) အမိန့်မှ cut, သံချေး, အဖုံးဖွင့်လှစ်ခြင်း, သက်တမ်းလွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း, လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်လျှောက်လုံး corrode မထားဘူး။ စာရွက်သံမဏိအဖုံးခံရသောဒဏ်ချက်အား trotters အစားထိုးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ဘိုမူရင်းသွန်းသံအဖုံးဗားရှင်း
14 မျက်နှာကျက် Trellis အရိပ်ကင်: Panel ကို slat ကင်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်အတွက်ငါးမွေးကန်ကိုအလှဆင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်ခွဲခြားကွယ်။ ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ Slat လိုက်ကာ, awnings ပတ္တာ pergola ရိုးကိုခေါက်: လေဝင်လေထွက်ကင်ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Splashboard အမှတ်တရ Panel များနေကာ / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေမျက်နှာပြင် Partition ခွဲ Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်ဖွင့်လှစ်။
Form ကိုတွဲချည်ပေါ် 15. FORMWORKS / ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ထိုစနစ်ဖြစ်ပါတယ် Dywidag မျဉ်းတစ်လျှောက်လုံးချည်နဲ့လှံတံကိုသံမဏိ၏လည်စည်း (လည်စည်းလှံတံကို) + WingNut (တောင်ပံခွံမာသီး) + ရေအဆို့ + သံမဏိကန်တော့ချွန်: စစ်ကူတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါသည်အမှတ်တရအသုံးပြုကြမ်းပြင်ကွန်ကရစ်ဟာ System လက်သမား Design- အပေါ်သစ်အသုံးပြုဆက်ဆံမှုများ၏အဆောက်အအုံအခြားဆောက်လုပ်ရေး FORMWORKS ။ / Hole Spacing ဖန်မျှင်ထည် FormTies / ငြမ်းစျေးနှုန်း ပေးသွင်း bracket ကအမျိုးအစားကိုခံနိုင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဆန့အစှမျးသတ်တိ။ ထိုကဲ့သို့သောကွန်ကရစ်နှင့်အတူရိုးကိုဆက်ထိန်းထားအဖြစ်အမျိုးမျိုး၏ formwork နှင့်အတူသုံးနိုငျကြီးမားသောသံမဏိကျောက်ဆူးပုံစံပြိုင်ပွဲ Tyne, Wing အခွံမာသီးများပါဝင်ပါသည်, အဆစ်, ရေ, အခွံမာသီး, ဤလှိုင်းတံပိုးရှိသော counterpart, သော့ခလောက်, သော့ခလောက်ခြောက်, အဆစ်တွေ့ဆုံရန်။ ရူ့, အမြစ်, နွေဦးညှပ်, သပ်ညှပ်, Poly ကန်တော့ချွန်နဲ့သံမဏိ girder ၏ပလပ်စတစ်အခြေစိုက်စခန်း
ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါလုပ်ကွက်ဆန်ခါကို ABS Spa ရေကူးလျှံ။ အဆိုပါကင်ပန်းကန်ရေပိုလွှဲအစွန်းရေကူးကန် (အဖြူ) ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ GratingsIs ဂရုတစိုက်ခွန်အားပေါင်းစပ်ဖို့ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်ရဲ့သက်တမ်းရှည်အောင်ဖို့နဲ့စင်္ကာပူကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနှင့်စံချိန်စံညွှန်းဘုတ်အဖွဲ့ကစမ်းသပ်ပြီးကြောင့် 500kg ထက်ပိုပြီးခံနိုင်ရည်နိုင်အဖြစ်က၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မှ mounded ပစ္စည်းများနှင့်ဆေးထိုး၏။
specification, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်ခြံမြေနှင့် Feature ကို :. အလေးချိန်အတွက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတာရှည်ခံခြင်းနှင့်အလင်း Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) မြင့်သောဝန်ဒဏျခံ, အမြင့်သက်ရောက်မှုအစွမ်းသတ္တိကိုသံချေးအခမဲ့, ကို Maintenance အခမဲ့, မဟုတ်သောစလစ်မျက်နှာပြင်, Anti-ချေးနေရောင်ခြည်မှ (ခရမ်းလွန်) တစ်ဦးချင်းစီဘက်မှာသော့ခလောက်နှင့်အခွံမာသီးနှင့်အတူ mounded တစ်ဦးကတစ်ခုတည်း bar ကိုတိုက်ခိုက်ရန်။ အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ရန်သင့်လျော်အားဖြင့်ပူးပေါင်းခံရဖို့။ ဒါဟာပတ်ပတ်လည်ထောင့်, 45 ပေးသောပူးတွဲ၏ချိန်ညှိထောင့်အားဖြင့်ဒီဇိုင်းများမဆိုကြင်နာဖို့ဖွဲ့စည်းနိုင်မည်နည်း ပူးတွဲ 90? ပူးတွဲခြင်းနှင့်ဖြောင့်ပြေး။ လျှောက်လွှာ၏ဧရိယာ: ဘန်ဂလို, ကွန်ဒိုမီယံ Semi-detach လုပ်လိုက်သော, Terrace အိမ်များ, HDB, ်ပူးဆေးရုံတွေ, ဟိုတယ်, စက်ရုံများ, အလုပ်ရုံ, Market ကနေရာများ, ပန်းခြံများ, ဓာတုအပင်ရေကူး။
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေကူးကန် built အစိတ်အပိုင်းများလိုအပ်ကြောင်းကို set up ကိုအကောင်းဆုံးဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အတူအသက်ပိုရှည်ရန်အလို့ငှာအတွက်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများနှင့်အတူ။ ဤအကြောင်းကြောင့်သာပထမဦးဆုံးအရညျအသှေးကိုသုံးပါ ကုန်ကြမ်းများနှင့်ကျွန်တော်အီတလီမှာထုတ်လုပ်ရန်။ PVC, ကို ABS နှင့် polypropylene copolymer ရှိသည် , ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အပေါ်တည်ငြိမ်ရေးကိုတိုးမြှင့်သက်ရောက်မှုများနှင့်မှိုနှင့်ဘက်တီးရီးယားမှခံနိုင်ရည်ဖြစ်လာရန်တစ်ဦးရောနှောဒြပ်ပေါင်း။ ကျနော်တို့ safisty မှအမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ဆန်ခါထုတ်လုပ်ရန် အကောင်းဆုံးကိုရေထွက်သွားခွင့်ပြုပါရန်အားလုံးအပြိုင်ဒြပ်စင်နှင့်အတူတိုင်းရေကူးကန်။ အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုအပြည့်အဝ FINA နှင့်မှလေးစားသော ROHS မှစွဲလမ်းအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်ဥရောပစံချိန်စံညွှန်းကိုလှမျး။ အဆိုပါထုတ်ကုန်စည်းမျဉ်းထို FINA လိုက်နာအနေနဲ့အားလုံး uni TH 13451.
Yüzme Spa ရေကန်လျှံအပေါက်ခြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များက၎င်း၏ထက်သာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြင့်မားသောသက်တမ်းများအတွက်စျေးကွက်အတွက်တန်ဖိုးထားသောရေကန်ဆန်ခါ, ရေကူးဘို့ထုတ်လုပ်ရန်။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောပူဇော်; အရောင်များ, အရွယ်အစားနှင့်စတိုင်များ၏အမျိုးမျိုးအတွက်အုပ်ကြွပ်ဆန်ခါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရေကူးကန်လျတ်ပိုမိုနှစ်သက်စေနိုင်သည်။ ခြစ်အားလုံးရေကန်ရေမျက်နှာပြင်တလျှောက်တွင်ဘေးထွက်ရေ channel မှာ installed နေကြသည်။ အဆိုပါ swimmers.Our ရေကူးကန်ခြစ်ခြင်းဖြင့်ခုန်သို့မဟုတ်ရေကူးမှုကြောင့်ဤအရေလွှမ်းမိုးသောထို client များအကြားဝယ်လိုအားအပေါ်မြင့်မားသောဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် clients များအလွန်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေကူးကန်ခြစ်နှင့်ကိုယ်ပေးသော်လည်းနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရေကူးကန်လျတ်ဆန်ခါအုပ်ကြွပ်ကိုဆက်ကပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်အဆန်ခါ tile ကအထူးသဖြင့်ဖြီးကဲ့သို့သောဖွဲ့စည်းပုံထိထိရောက်ရောက်လှိုင်းတံပိုး၏မြန်နှုန်းနှေးကွေး, နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများမှအတည်ပြုလိုက်သည်။ ဒါဟာအဆင်ပြေများနှင့်ဆန့်ကျင်ချောဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူ installation နဲ့အရှည်၏ပိုမိုလွယ်ကူပြဌာန်းခွင့်ခွင့်ပြု; ကျနော်တို့အမြောက်အများလိုအပ်ချက်များကိုဘို့ငါတို့ဖောက်သည်များအတွက်ဆန်ခါကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရေကူးကန်လျတ်ဆန်ခါအုပ်ကြွပ်ကိုဆက်ကပ်။ အရောင်များ, အရွယ်အစားနှင့်စတိုင်များတစ်အမျိုးမျိုးရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ရေကူးကန်ခြစ်၏ဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားရေကူးကန်ထဲကရေများလျှံ minimize ။ ဤရွေ့ကားရေကူးကန်၏ရေနုတ်မြောင်းစနစ်အားချိတ်ဆက်ထားသည့်ယိုစီးမှုသို့ရေလွယ်ကူသော seepage ခွင့်ပြုထားတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့တန်းပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်သံမဏိသုံးပြီးလုပ်ကြံနေကြတယ်။ ဤရွေ့ကားရေကူးကန်ထဲကရေများလျှံ minimize ။ ဤရွေ့ကားရေကူးကန်၏ရေနုတ်မြောင်းစနစ်အားချိတ်ဆက်ထားသည့်ယိုစီးမှုသို့ရေလွယ်ကူသော seepage ခွင့်ပြုထားတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့တန်းပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်သံမဏိသုံးပြီးလုပ်ကြံနေကြတယ်။ ဤရွေ့ကားရေကူးကန်ထဲကရေများလျှံ minimize ။ ဤရွေ့ကားရေကူးကန်၏ရေနုတ်မြောင်းစနစ်အားချိတ်ဆက်ထားသည့်ယိုစီးမှုသို့ရေလွယ်ကူသော seepage ခွင့်ပြုထားတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့တန်းပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်သံမဏိသုံးပြီးလုပ်ကြံနေကြတယ်။
ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ကိုအောက်တွင်ခြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး၏သှေးဆောငျ features တချို့ကိုနေသောခေါင်းစဉ်: ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအတွက်သာရရှိနိုင်သည့်နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေး, Anti-ချောနှင့်အလွန်အဆင်ပြေ, အတည်ပြုပါ, ခရမ်းလွန် Co-ပေါ်လီမာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကုသ, ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အရောင်ရရှိနိုင်, အဆိုပါဆေးထိုးပုံသွင်း။ ဒီဇိုင်းကပြီးပြည့်စုံ finish ကိုပေးသည်။ install လုပ်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်, အဲဒီကွေးနှင့်ဖြောင့်နှစ်ဦးစလုံးလွှမ်းမိုးသောများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအမြင့်, အကျယ်နှင့်အရှည်: အကို client ဓာတုနှင့်အချေးခုခံ၏လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်စံပြရေကူးကန်များနှင့် Spa မ်ား၏လျတ်စနစ်များသည်။
ယနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာသင်ကလူနေအိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ် setting တွင်ရေကူးပုဂ္ဂလိကကလပ်အသင်းအတွက်ရေကန်, ကျန်းမာရေးကလပ်, ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာများ, ရပ်ရွာစင်တာများနှင့်သင်တန်း၏ပုဂ္ဂလိကရေကန်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာငါတို့ရှိသမျှသည်ပြိုင်ပွဲများအတွက်အပန်းဖြေသို့မဟုတ်မီးရထားအဘို့ကိုစုသိမ်းနိုင်ပါတယ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရေကူးကန်များမရှိတော့ပဲတစ်ဦးအာမင်အဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်; ယနေ့သူတို့အနေနဲ့ဖြားယောင်းရှုခင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝကကျောက်ထက်သာလွန်သည်၎င်း၏သဘာဝကကောင်းသောရူပနှင့်အသင့်လျော်မှုနှင့်အတူရေကူးရေကန်ခြစ်ပြီးပြည့်စုံသောရေကန်ဆန်ခါအဘို့လုပ်ရမည်။ အဘယ်သူမျှမအခြားသူတွေနဲ့တူနေတဲ့ရေကူးကန် Build, ရေကူးကန်ခြစ်အထူးသဖြင့်မကြာခဏစိုစွတ်သောဒေသများရှိနှစ်ဦးစလုံးကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်ကဘေးကင်းလုံခြုံအောင်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စလစ်ခုခံရှိသည်။ ကလေးကျောက်စရစ်ခဲနဲ့စို့မိုဃ်းကိုရွာစေ၏ပါးလွှာသောအလျားလိုက်အပေါက် slot နှစ်ခု၏သေးငယ်တဲ့ဘဲဥပုံအပေါက်ဟာဆန်ခါမှာသူတို့ရဲ့ခြေချောင်းဖမ်းထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းက၏စိုးရိမ်ရေမှတ်ပပျောက်။ ရေကူးကန်ခြစ်ရေကူးတဲ့အနိမ့်ရေစုပ်ယူသည့်သဘာဝကျောက်နှင့်ကျောက်ပြားနှင့်မတူဘဲ, ရေကူးကန်ကိုရေနှင့်အဆက်အသွယ်ရသောအခါသူတို့၏အရောင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေကူးကန်ခြစ်ဖွရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေကူးကန်ခြစ်လည်းစိတ်ထဲ၌အကြှနျုပျတို့၏ပတျဝနျးကငျြ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လုပျဆောငျဖို့လိုအပျသောအရာကိုသိရန်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကာဗွန်ခြေရာကိုလျှော့ချဖို့စညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်နှင့်ဤကျနော်တို့ကဂေဟစနစ်ကိုကာကှယျရနျကြှနျုပျတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိန်းသိမ်းရန်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ဟာသူ့ရဲ့အဓိကကုမ္ပဏီ၏ရူပါရုံ၏တန်ဖိုးများနှင့်မစ်ရှင်အတွင်းကနေမောင်းနှင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်သယံဇာတထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထုတ်လုပ်မှုမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အသက်ရှည်နှင့်အရည်အသွေးသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အနည်းဆုံးအသစ်ပြန်လည်အကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှုကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြစ်များအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်းလျှော့ချလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အစိမ်းရောင်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ဒီဇိုင်း၌သင်တို့၏မိတ်ဖက်ဖြစ်ကြသည်။